မိုးမခ မီဒီယာ - MoeMaKa News & Media: September 2007
ဆရာဦးဝင်တင် လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တဲ့ စာနယ်ဇင်း သပိတ်အလံ သိုႚ
ဆရာဦးဝင်တင် လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တဲ့စာနယ်ဇင်း သပိတ်အလံ သိုႚမောင်ရစ်အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၀၇ ၁၉၈၈ုသဂုတ်လ အရေးအခင်းမတိုင်မီမြာ ဆရာဦးဝင်းတင်နဲႚ စာနယ်ဇင်းသမာုးကီးတေကြူမန်မိာိုံင်ငံရေး အကဵပ်အတည်းကို လက်မတ်ြဝိုင်းထိုးပီး တင်ူပဖိုႚုကြိးစားခဲု့ကပၝတယ်။ စာနယ်ဇင်းဆရာတြေ စုစည်းလိုက်တဲ့အခၝ အားလုံးက တညီတညတ်ြတည်း လက်မတ်ြထိုးခဲု့ကပၝတယ်။ မောင်ရစ် က ကောလိပ်ကေဵာင်းသား၊ ကာတနြ်းဆရာ ပေၝက်စ ပၝ။ လူုကီးတေဝြိုင်းနားမြာ ရစ်သီ ရစ်သီနဲႚ ဘာ ၀င်လုပ်ရ ကောင်ိးိုံိးိုံးနဲႚပေ့ၝ။ နောက်တော့ မရဲတရဲနဲႚ မေုးကည့်မိတယ်၊ ကဵနော်ကော လက်မတ်ြထိုးလိုႚရသလားပေၝ့။ ဆရာုကီးတေကြ သူတိုႚမသိတဲ့ ကလောင်လေးကို - "ဟာ … ရတာပေ့ၝ၊ လာ … လက်မတ်ြထိုး" တဲ့။ မောင်ရစ်ေုကာက်ေုကာက်နဲႚ လက်မတ်ြထိုးခဲ့မိတယ်။ နောင်ကဵတော့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကီး နံရံမြာ ကပ်ထားတဲ့ မဆလစနစ်ကို ဆန်ႚကဵင်ခဲ့တဲ့ ကလောင်ရင်ြတြေ စာရင်းထဲက မောင်ရစ် နာမည်လေးကို ဂုဏ်တြေ ယူပီး မိုးရေတြေုကားထဲ သြားသြား ရြာုကည့်ခဲ့မိတယ်။ အိပ်မက်တြေ အထိပၝပဲ။ ၁၉၈၈ုသဂုတ်လ မိုးရေစက်တေထြဲမြာ သူငယ်ခဵင်းကေဵာင်းသားတေနြဲႚ ခဵီတက်ဆိံ္ဋူပဖိုႚ မောင်ရစ် သြားတော့မယ့် အခဵိန်ကို သတိရမိူပန်တယ်။ ကဵနော့်အဖြားက (ခင်မဵြိးခဵစ် ဆိုတဲ့ ကဵန်းမာရေးဆိုးဆိုးနဲႚ ခဵိခဵိနဲႚနဲႚ စာရေးဆရာမ အဖြာုးကီး က) ကဵနော့်ကို လမြ်ိးံတ်ြဆက်တယ်။ "အေး … အေး၊ သြား … သြား " တဲ့။ "ငၝတိုႚတုန်းကလည်း လုပ်ခဲူ့ပီူးပီ၊ေုကာက်ေုကာက် နဲႚပဲ" … တဲ့။ "အခု မင်းတိုႚ အလညြ့် ရောက်လာူပီ၊ သြား … သြား" … တဲ့။ ကဵနော်လည်းေုကာက်ေုကာက်နဲႚ သြားခဲ့ ရတာပၝပဲ။ အဲဒီထဲက ကဵနော်တိုႚ သြားခဲ့ရတာ - မိုင် ထောင်သောင်းခဵီခဲ့။ အိမ်တေနြဲႚ ဝေးခဲ့ပေ့ၝ။ ဒၝပေမယ့် အဲဒီထဲက ကိုင်စြဲခဲ့တဲ့ ကလောင်ကလေးဟာ ဦးဝင်းတင်တိုႚ စာနယ်ဇင်းသပိတ်လက်မတ်ြစာရင်းမြာ တိုႚ ထားခဲူ့ပီးတဲ့နောက် သူတိုႚကို သင်္စာဖောက်တဲ့ ကလောင်ဆိုး ကလောင်ပဵက် မူဖစ်ခဲ့ပၝဘူး။ အမဵြိး ဘာသာ သာသနာ လတ်ြလပ်ခငြ့်အတကြ် ရပ်တည်ရဲခဲ့ ရပၝတယ်။ အဲဒီတုန်းကတည်းက ၈၈ မိုးရေစက်တေထြဲေုကာက်ေုကာက်နဲႚ လ္တွောက်နေဆဲေူခလမြ်းတေကြ သင်ုကားပေးခဲ့တာက လူဆိုတာ တခၝပဲ သေတယ်တဲ့။ မောင်ရစ် ခဏ ခဏ မသေတတ်ပၝ၊ အခုလည်း ကဵနော်တိုႚ အိံစြ် ၂၀ နီးပၝုးကာတဲ့အခၝ အမဵြိး ဘာသာ သာသနာကို ဖဵက်ဆီးနေတဲ့သူတေကြိုပတ်ူပတ်သားသား ဆန်ႚကဵင် သပိတ်မြောက်ုကဖိုႚ အခငြ့်ုကြုံကရူပန်ပၝူပီ။ မောင်ရစ်တိုႚ တတေကြို ဆရာဦးဝင်းတင်က သံတိုင်တြေုကာူးပြံုးကည့်နေပၝလိမ့်မယ်။ သာသနာ့အလံ နဲႚ ခပ်ြဒေၝင်းအလံ တိုႚ အူမင့်မားဆုံးလငြ့်ထူုကတဲ့အခၝ ရေဒြေၝင်းတောင် ကလောင်အလံတေလြည်း သူတိုႚနဲႚအတူတြဲ လိုႚ လက်ဆင့်ကမ်း ခဵီတက်ုကပၝစိုႚ။ ကဗဵာဆရာ အောင်ဝေး လိုခဵင်တာ ၃ ခုပၝ၊ူငိမ်းခဵမ်းရေး၊ မေတ္ဇာ နဲႚ စားစရာ။ ကဵနော်တိုႚလည်း ခင်ဗဵားတိုႚလိုခဵင်တာကိုပဲ ဆက်တောင်းဆိုပၝတယ်။ လေးစားစြာူဖင့် မောင်ရစ် (အောက်တိုဘာ ၁၊ ၂၀၀၇)
Reactions: Petition-signing at Burmese embassy in Singapore
Reactions: ပဵံလန်ြတော်မူသည့် သံဃာတော်ရုပ်အလောင်း
ပဵံလန်ြတော်မူသည့် သံဃာတော်ရုပ်အလောင်းငမိုးရိပ်ခေဵာင်းတငြ် မေဵာပၝလာစက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အင်တာနက်သတင်းအေဘီစီသတင်းတငြ် ဖော်ူပထားပၝသည်။ ဆုံစည်းရာမြ ကူးယူဖော်ူပသည်။
Reactions: မောင်စမြ်းရည် - စာနယ်ဇင်းသမားတိုႚ ဘာလဲ ဘယ်လဲ
စာနယ်ဇင်းသမားတိုႚ ဘာလဲ ဘယ်လဲမောင်စမြ်းရည်စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ သံဃာတေနြဲႚ ကေဵာင်းသူ ကေဵာင်းသား စေဵးသူ စေဵးသားတြေ သပိတ်မမြောက်ခင် ရက်ပိုင်းမြာပဲ ထက်ြလာတဲ့ တိုင်းမ် မဂ္ဂဇင်းမြာ အနီိုံ နဲႚ အနီရင့် ကမ္တာေူမပုံတခဵပ် ပၝလာတာတြေႚလိုက်ပၝတယ်။ အဲဒီေူမပုံကတော့ ကမ္တာပေၞမြာ သတင်းလတ်ြလပ်ခငြ့် အနည်း အမဵာူးပထားတဲ့ေူမပုံပၝပဲ။ သင်တိုႚ ဘယ်လောက်လတ်ြလပ်သလဲ လိုႚ မေးထားပၝတယ်။ ဗမာူပည်ကိုကည့်လိုက်တော့ သုညအဆင့်မြာ တြေႚလိုက်ရပၝတယ်။ စာရေးခငြ့် သုဉ်း၊ေူပာဆိုခငြ့် သုဉ်း၊ နားထောင်ခငြ့် သုဉ်း၊ စာသုဉ်း ပေသုဉ်း၊ လူႚခငြ့်သုဉ်း၊ ဆုံးရြံရလေ တိုႚတတေသြည် - သေသော်မတြည့်၊ အော် ကောင်းဧ။် ... လိုႚသာ ဆိုရပၝတော့မယ်။ ဗမာူပည်မြာ စာနယ်ဇင်းတေအြားလုံးကို စိစစ်ရုံ မကတော့ဘဲ၊ သူတိုႚရေးစေခဵင်တဲ့ စာတြေ၊ သူတိုႚပၝစေခဵင်တဲ့ စာတေကြိုပၝ ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့၊ အရပ်ရပ် နေူပည်တော်ုကားလိုႚမြ မတော်တော့ပၝဘူး။ ကမ္တာမြာ ဗမာ စစ်တပ်ကြ လိုႚ မိုက်ူပနေတာနဲႚ ဘာထူးတော့မလဲ။ မုကာခင်ကပဲ သူတိုႚထည့်ခိုင်းတာ မထည့်တဲ့ စာနယ်ဇင်းအခဵြိႚကို ပိတ်လိုက်ေုကာင်ုးကားရပၝတယ်။ သူတိုႚထည့်ခိုင်းတာကို ကိုယ့်စာနယ်ဇင်းရဲႚ စာမဵက်ြိာံမြာ ကဵက်သရေအတုံးခူံပီး ထည့်မယ့်အစား၊ ခုလို အပိတ်ခံလိုက်ရတာ ဂုဏ်ရြိလေစလြိုႚ သဘောရပၝတယ်။ ဟုတ်ပၝတယ်၊ စာနယ်ဇင်းတေမြာ ညစ်ပေကုန်ပၝူပီ။ူဖစြင်ခငြ့်မရရင် ဘာလုပ်ုကရမလဲ။ သံဃာတေကြတော့ ၀ၝ၀င်းခငြ့်မရရင် - နီရဲခငြ့်ကိုပဲ ခံယူလိုက်ပၝူပီ။ မေတ္ဇာသုတ် ရတ်ြရင်း၊ သြေးေူမကဵ ခံသြာုးကပၝူပီ။ ကမ္တာမြာ မုကြံဘူးတဲ့ မေတ္ဇာသတ္ဇိကို ရဲရဲတောက်ူပလိုက်ုကပၝူပီ။ ကမ္တာစာနယ်ဇင်းတြေ၊ ရုပ်သံတေမြာ အ၀ၝရောင်တော်လန်ြရေး ဆိုတဲ့ စကားအသစ် ပေၞထနြ်းသြားခဲ့ပၝူပီ။ ကဵနော်တိုႚ စာနယ်ဇင်းသမားတြေ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ။ အဖိုးသခင်ကိုယ်တော်မြိင်း၊ ဒီးဒုတ်ဦးဘခဵြိ၊ ဆရာုကီး ရြေဥဒေၝင်း၊ ဂဵာနယ်ကေဵာ်ဦးခဵစ်မောင်၊ ဂဵာနယ်ကေဵာ် မမလေး၊ အင်ဒီပင်းဒင့် ဒေၞစန်း၊ ဒေၞခင်မဵြိးခဵစ်၊ လူထုဦးလြ၊ လူထု ဒေၞအမာ၊ ဗန်းမော်တင်အောင်၊ မောင်သော်က၊ သခင်အုန်ူးမင့် နဲႚ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် စတဲ့ စတဲ့ စာနယ်ဇင်းသမာုးကီးတေဟြာူပည်သူထုတိုႚရြေႚက ရပ်ူပီး သတ္ဇိူပခဲု့ကပၝူပီ။ ကဵနော်တိုႚ ခေတ်မြာက လုပ်စရာက ဆုတ်စရာ မကဵန်တော့ပၝဘူး။ ဒၝေုကာင့် ရဲဘော်တိုႚ ခင်ဗဵား - စာနယ်ဇင်းအားလုံး အမဲအညစ် မခံဘဲ တူပိင်ြတည်း ရပ်လိုက်ုကပၝစိုႚ။ သံဃာတော်မဵားနဲႚအတူ စစ်အစိုးရကို ပတ္ဇနိက္ကဇ္ဆြ ကံဆောင် လိုက်ုကပၝစိုႚ။ အ၀ၝရောင် တော်လန်ြရေးကို အူဖရြောင် တော်လန်ြရေးနဲႚ ကလောင်ဆေးပြဲ ကဵင်းပုကပၝစိုႚ။ နောက်ဆုံးပိတ် တိုက်ပြဲ ဆင်ြိဲုံကပၝစိုႚ။ အာဏာရင်ြစနစ် ကဵဆုံးပၝစေ။ အရေးတော်ပုံ အောင်ပၝစေ။(စက်တင်ဘာ ၂၉၊၂၀၀၇)
Reactions: စကဿာပူရောက်ူမန်မာမဵာူးပည်တငြ်းက သံဃာသပိတ် ထောက်ခံပြဲ ကဵင်းပခဲ့
စကဿာပူရောက်ူမန်မာမဵာူးပည်တငြ်းက သံဃာသပိတ် ထောက်ခံပြဲ ကဵင်းပခဲ့မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၉ တငြ် စကဿာပူရောက်ူမန်မာပရိသတ် ၄ ထောင်ကေဵာ်ကူမန်မာဘုန်းတော်ုကီးကေဵာင်းတငြ် ၂ ရက်တိုင်တိုင် စုစည်ူးပီူးမန်မာူပည် သံဃာသပိတ်ုကီးကို ထောက်ခူံခင်ိးံငြ့် စစ်အာဏာပိုင်မဵားဧ။် သာသနာတော်အား လုပ်ုကံသတ်ူဖတ်ူခင်းကို ကန်ႚကက်ြရြံခဵူခင်း လူထုစုဝေးပြဲုကီး တရပ် ကဵင်းပိုံင်ခဲ့သည်။ူမန်မာသံရုံးရြေႚတင်ြလည်း စကဿာပူအတိုက်အခံပၝတီိံငြ့် ပူးပေၝင်ူးပီး ကန်ႚကက်ြသည့် စုဝေးမတြစ်ခုပလြုပ်ိုံင်ခဲ့သည်။ ရဲမဵား စက်ြဖက်ြေိာံက်ယက်ြနေသည့်ုကားကူမန်မာ ၃၀၀ ခန်ႚ လာရောက်သည်ဟု သိရပၝသည်။
Reactions: အရင်ြဉာဏိက - လတ်ြလပ်တဲ့သူ
လတ်ြလပ်တဲ့သူအရင်ြဉာဏိက စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ “Give Me Liberty or Give Me Death”. American Revolutionary War တနည်းအာူးဖင့် American War of Independence လိုႛ မတ်ြတမ်းတင်ုကတဲ့ အမေရိကန်ိုိံင်ငံ လတ်ြလပ်ရေးတိုက်ပြဲ ၀င်စဉ်ကာလက "ပစ်ထရစ် ဟင်နရီ"ေူပာုကားတဲ့ စကားတစ်ခနြ်းပၝ။ ကမ္တာအရပ်ရပ်ရြိ လတ်ြလပ်ရေးအတကြ် တိုက်ပြဲဝင်နေုကတဲ့ တော်လန်ြရေးသမားမဵားအားလုံး၊ အဖြိံပ်ခံလူထုအရေး အသက်သြေးခေဋ္ဋး စတေးပေးဆပ်ကာ တောင်းဆိုနေုကတဲ့သူတြေ အားလုံး ဒီစကားကိုကားဖူုးကမြာပၝ။ူမန်မာူပည်ကို အဂဿလိပ်အုပ်စိုးစဉ်ကလည်း "ကဋ္ဋန်သပေၝက်တစ်ယောက်အူဖစ် အသက်ရင်ြနေရတာထက် သေရတာမြူမတ်သေးတယ်" ရယ်လိုႛ လတ်ြလပ်ရေးအတကြ် တိုက်ပြဲဝင်စိတ်ဓာတ်နဲႛူမန်မာ့အာဇာနည် သူရဲကောင်းမဵားလည်း အလားတူစကားမဵြိးကိုေူပာခဲ့ဖူုးကပၝတယ်။ ငယ်စဉ်က သမိုင်းစာအုပ်ထဲမြာ ဒီစကားမဵားကို ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ ဘာေုကာင့် တော်လန်ြရေးခေၝင်းဆောင်တေကြ ဒီစကားမဵြိးေူပာခဲု့ကတာလဲ။ လတ်ြလပ်မဆြိုတာ ဘ၀ရပ်တည်မအြတကြ် ဘယ်လောက်အရေးဋ္ဌကီးလိုႛ ခုလိုစကားမဵြိးကို ဆိုခဲု့ကတာပၝလဲ။ အဲဒီတုန်းကတောူ့ပည့်ူပည့်၀၀ နားမလည်ခဲ့ပၝဘူး။ သိုႛပေမယ့် ဒီစကားထဲမြာ ခန်ြအားတစ်ခုခုပၝနေသလိုပဲ ဆိုတာကိုတော့ ခံစားခဲ့မိတယ်။ ကဋ္ဋန်ူဖစ်ရတာ မကောင်းဘူး ဆိုတာလောက်တော့ နားလည်ခဲ့တယ်။ အရယ်ြရလာလိုႛ အသိဉာဏ်ရင့်လာတာနဲႛအမ္တွ ဒီစကားကို ပိုမိုနားလည်လာတယ်။ "ကဋ္ဋန်"ဆိုတာ ခဵပ်ြခဵယ်မအြောက်မြာ နေနေရတာ။ အခဵပ်ြအခဵယ်ဆိုတာ ကဵဉ်းကဵပ်တဲ့အရာ၊ လူႛစမြ်းရည်ကို ပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့အရာ၊ လူသားတစ်ယောက်ရႚဲ ရပိုင်ခငြ့်တေကြို ခဵြိြးိံမ်ဖဵက်ဆီးတဲ့အရာလိုႛ နားလည်မိတယ်။ အတားအဆီး အခဵပ်ြအြေိာံင်မန်ြသမ္တွ ဘယ်အတားအဆီး အခဵပ်ြအြေိာံင်မြ ကောင်းကဵြိးမပေးဘူးလိုႛလည်း ခံယူမိတယ်။ ဒၝေုကာင့် အတားအဆီး အခဵပ်ြအြေိာံင်ဆိုလ္တွင် သူႛသဘောတရားကို မဆိုထားနဲႛ၊ ဒီစကားကို ကိုယ်စာူးပြ ဖော်ူပတဲ့ "အတားအဆီး အခဵပ်ြအြေိာံင်" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတောင်မပြဲ မလိုလားမိံစ်ြသက်ူဖစ်မိတယ်။ ပေးတာယူ၊ ခိုင်းတာလုပ်၊ ကေဋ္ဋးတာစား၊ တရား၏ မတရား၏စသည် ဘာတစ်ခုမြ အပိုမစဉ်းစားတဲ့ ကဋ္ဋန်စိတ်ဓာတ်ရြိသူတေကြ လတ်ြလပ်မတြန်ဖိုးကို နားလည်ိုိံင်မြာ မဟုတ်လိုႛမိုႛ လတ်ြလပ်မဆြိုတာကို မုန်ႛဟင်းခၝးတစ်ပြဲလောက်မြ တန်ဖိုးထားခဵင်မထြားမယ်။ နောက်္ဘပီး အရင်ြသခင် နေရာကို အဓမ္ထရယူထားသူတိုႛအတက်ြတော့ ဟိုဘက်လန်ြနေတဲ့ လတ်ြလပ်မမြဵြိးရနေလိုႛ လတ်ြလပ်မတြန်ဖိုးကို ကောင်းကောင်းနားလည်လ္တွင်မြ နားလည်လိမ့်မယ်။ ကိုယ်လုပ်ခဵင်တိုင်း လုပ်နေရလိုႛ နားမလည်ဟန် ဆောင်နေတာလည်ူးဖစ်ိုိံင်ပၝတယ်။ အသိဉာဏ်ရြ္ဘိပီး လူသားစိတ်ဓာတ် ရြိသူတိုင်းကတော့ လတ်ြလပ်မကြို လိုခဵင်တယ်။္ဘငိမ်းခဵမ်းတာကိုမတ်ိုိံးတယ်။ မ္တွတတာကို သဘောကဵတယ်။ လတ်ြလပ်မကြို ခဵစ်တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ် ဆိုတာ လူသားတိုႛရဲႚ အေူခခံစိတ်ဓာတ်၊ မြေးရာပၝ စိတ်ဓာတ်ပၝ။ ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာ ဇာတိစိတ်ူဖစ်သလို အိံ္ဇိမ - အဆုံးပန်းတိုင်စိတ် လည်းပဲူဖစ်တယ်။ သံသရာက ထကြ်ေူမာက်ရေး ၀ိမုတ္ဇိသုခဆိုတာ ဆင်းရဲတေကြနေ၊ အခဵပ်ြအြေိာံင်၊ အကန်ႛအသတ်အားလုံးကနေ လတြ်ေူမာက်မကြို ဆိုလိုခင်ူးဖစ်တယ်။ လူသားတိုင်း လူသားတိုင်းမြာ အူခားအူခားသောူပင်ပသူတေရြဲ့ အခဵပ်ြအြေိာံင်တေကြနေ လတ်ြလပ်အောင်ဋ္ဌကြိးစားဖိုႛ လိုသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပန်လည်ခဵပြ်ြေိာံင်တဲ့ အခဵပ်ြအြေိာံင်ကနေ လတြ်ေူမာက်အောင်လည်း ဋ္ဌကြိးစားအားထုတ်ဖိုႛ လိုတယ်။ လတ်ြလက်မအြောက်မြာသာူပည့်ဝတဲ့ ပေဵာ်ရင်ြမရြိတယ်။ စစ်မန်ြတဲ့္ဘငိမ်းခဵမ်းမရြိတယ်။ သာယာတဲ့ ဘ၀ရသ ကိုလည်း ခံစာိးုိံင်တယ်။ လတ်ြလပ်မဆြိုတာ တစ်ဦးပိုင် တစ်ဖြဲႛဆိုင် အရာလည်းမဟုတ်ဘူး။ လူသားတိုင်းနဲႛ ဆိုင်တဲ့အရာူဖစ်တယ်။ လူသားတိုင်းလည်း ပိုင်ဆိုင်ခငြ့်ရြိတယ်။ အမဵားနဲႛဆိုင်တဲ့အရာူဖစ်လိုႛ အားလုံး ခံစားသုံးဆောင်ိုိံင်သလို အားလုံးမြာလည်း လတ်ြလပ်မနြဲႛိံယ်ြတဲ့ တာဝန်ရြိတယ်။ ဒီတာဝန်ကတော့ ရြ္ဘိပီးသားလတ်ြလပ်ရေးဆိုလ္တွင် တာရည်ြတည်တန်ႛအောင် စောင့်ရြောက်ထိမ်းသိန်းဖိုႛနဲႛ မရြိသေးတဲ့ လတ်ြလပ်ရေးဆိုလ္တွင်လည်း ရြိအောင်ရအောင် ဋ္ဌကြိးစားဖိုႛတာဝန်ူဖစ်တယ်။ လူသားတစ်ယောက်ူဖစ်လာလ္တွင် ဥပဒေအရ လိုက်နာရမည့်တာဝန်ရြိသလို စာနဲႛပေနဲႛ ဥပဒေအူဖစ် သတ်မတ်ြမထားပေမယ့် ယဉ်ကေဵးတဲ့လူႛူဖစ်စဉ်အရ အလိုလို လိုက်နာထိန်းသိမ်းရမည့် ဥပဒေသတေလြည်း ရြိတယ်။ ကိုယ့်အသိနဲႛကိုယ် ယူရမည့်တာဝန်တေလြိုႛလည်း ဆိုိုိံင်ပၝတယ်။ သတ်မတြ်ူပှူာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတေကြ လိုက်နာရမြာ အကန်ႛအသတ်ရြိတယ်။ လူႛယဉ်ကေဵးမအြရ၊ လူႛအသိဉာဏ်အရ လက်ခံရတဲ့ ဒီယဉ်ကေဵးမြ ဥပဒေသတေမြာတော့ အကန်ႛအသတ်မရြိဘူး။ အသိဉာဏ်ူမင့်လ္တွင်ူမင့်သလောက် တာဝန်ယူတတ်မအြပိုင်းက အလိုလိုမင့်လာတာမဵြိးပၝ။္ဘငိမ်းခဵမ်းမကြို ထိန်းသိမ်းကာကယ်ြရမည့်တာဝန်က ဒီအထဲမြာ ပၝ၀င်ပၝတယ်။ ကိုယ်ကိုယ့်ကို အသိဉာဏ် အဆင့်ူမင့်တဲ့ လူသားတစ်ယောက်လိုႛ ခံယူလ္တွင် စာနဲႛပေနဲႛ သတ်မတ်ြမထားတဲ့ ခုလိုတာဝန်ကို ကိုယ့်အသိဉာဏ်နႛဲကိုယ် ထမ်းဆောင်ဖိုႛလိုတယ်။ သူမဵားတိုက်တနြ်းလိုႛ တာဝန်ယူရတာ၊ ခိုင်းလိုႛလိုက်နာူပလြုပ်ရတာထက် ကိုယ့်အသိနဲႛကိုယ် လုပ်ရတဲ့ တာဝန်ကေဵပန်ြမကြ ပိုမိုမနြ်ူမတ်တယ်။ ယဉ်ကေဵူးခင်း အဓိပဍ္ဎာယ်ကို သယ်ဆောင်ရာလည်းရောက်တယ်။ လတ်ြလပ်မနြဲႛ္ဘငိမ်းခဵမ်းမကြို ကာကယ်ြထိန်းသိမ်းဖိုႛ အသက်ပေးရတာလည်းရြိတယ်။ စည်းစိမ်တေနြဲႛ ရင်ြးီံးရတာ လည်းရြိတယ်။ ဘ၀တစ်ခုလုံး၊ မိသားစုအသိုက်အ္ဘမြံတစ်ခုလုံး စနြ်ႛလတ်ြရတာတေလြည်း ရြိတတ်တယ်။ လတ်ြလပ်ရေးတန်ဖိုးမတ်ိုိံးလ္တွင်ူမတ်ိုိံးသလောက် စနြ်ႛလတ်ြဖိုႛ ၀န်မလေးတဲ့ စိတ်ဓာတ်တေလြည်း တိုးပြားလာတယ်။ လတ်ြလပ်ရေးဟာ လူတိုင်းလူတိုင်းနဲႛသက်ဆိုင်တယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်းလည်း လတ်ြလပ်မရြသကို ခံစားသင့်တယ်လိုႛ နားလည်ဖိုႛလိုတယ်။ အာဇာနည်စိတ်ဓာတ် ရြိသူမဵားဟာ ကိုယ်နဲႛ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကဵင်ဆိုတဲ့ ကဵဉ်းကဵဉ်းလေးအပေၞမြာ မုကည့်ဘူး။ ဒီလိုအာဇာနည်တြေေုကာင့်ပဲ လူသားတေအြနေနဲႛ လတ်ြလပ်ူခင်းအရသာကို ထိတြေႛခံစာုးကရူခင်ူးဖစ်တယ်။ ကိုယ်လို ဘ၀တူလူသားတြေ လတ်ြလပ်မရြသကို ခံစာခငြ့်မရဘူးဆိုလ္တွင် ကိုယ့်လတ်ြလပ်မကြို အသုံူးပ္ဘြပီး မလတ်ြလပ်သေးသူတေအြတကြ် ၀ိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ပေးဖိုႛလိုတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ပေးပၝမြ လူတိုင်းလူတိုင်း လတ်ြလပ်မအြရသာကို ခံစာိးုိံင်မယ်။ လူတိုင်းလူတိုင်း လတ်ြလပ်ပၝမြ လတ်ြလပ်မရြဲ့အဓိပဍ္ဎာယ်ဟာလည်း တကယ်ူပည့်ဝိုိံင်မယ်။္ဘငိမ်းခဵမ်းမလြည်း အမန်ြရြိမယ်။ ဟိုတြေးပူ၊ ဒီတြေးေုကာက်၊ မလိုအပ်တဲ့ စိုးရြံေုကာက်လန်ႛမမြဵားနဲႛ၊ တာဝန်ယူလိုမကြင်းတဲ့ စိတ်ဓာတ်မဵြိးနဲႛတော့ တကယ့်လတ်ြလပ်မရြသကို ဘယ်တော့မြ အူပည့်အ၀ ခံစာိးုိံင်မြာမဟုတ်တာ သေခဵာတယ်။ ။ အရင်ြဉာဏိက စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: မောင်စမြ်းရည် - သံဃာ့ဂုဏော အနေိံ္ဇာ
သံဃာဂုဏော အနေိံ္ဇာ မောင်စမြ်းရည်စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ တယောက်ပဲူဖစ်ူဖစ်ိံစ်ြယောက်ပဲူဖစ်ူဖစ်တိုင်ူးပည်ခဵစ်တာခဵစ်လိုႚရတယ်။နန်းခဵန်းတောင်းတဲ့စင်သီယာမောင် တဲ့တခေဵာင်ဆီမြာ တယောက်ခဵင်းပဲအူငင်း မပြားအခဵင်း မမဵားအ့ကင် မထားဘဲအလင်းတရားကို ရြာုကတယ်။မင်ူးမန်တယ်၊ ငၝူမန်တယ်၊မင်းမန်ြတယ်၊ ငၝမန်ြတယ်၊မင်းသန်တယ်၊ ငၝသန်တယ် လိုႚအသံမကဵယ်ဘဲ၊ မန်ြတယ်ထင်တာ လုပ်ုကတယ်။ငၝတတ်တယ်၊ ငၝူမတ်တယ်လိုႚလည်း မဖော်ငၝရဲတယ်၊ ငၝခဵဲတယ် လိုႚလည်း မမော်ငၝဆဲမယ် ငၝဟဲမယ်လိုႚလည်း မအော်တော်ရာကို ခဵင့်၊ သင့်ရာကိုသာ လုပ်ုကတယ်။တယောက်လည်း တယောက်အစမြ်ိးံစ်ြယောက်လည်ိးံစ်ြယောက်အစမြ်းသင်လည်ိးံမြ်းတလုံး၊ ငၝလည်ိးံမြ်းတလုံိးံမြ်း တလုံးတြေ ပေၝင်း၊ တင်းတောင်ူးပည့်ကာဆီူဖစ်လာမယ်။လာုကဟေ့ အူမန်တယောက်မြ နောက်ကဵ မကဵန်စေနဲႚ၊သံဃာတော် သပိတ် တသောင်းကိုံမြ်းစေ့တြေ လောင်ုးကမယ်စုပေၝင်း ဒၝနူပြုကစိုႚ။ကဲ ... ခုကည့်ခုကည့်တော့၊ ခုမင်ူပီလားမနားတမ်း ဖုံးတေဆြက်အင်တာနက်နဲႚ စာနယ်ဇင်းဝင်းဒိုးနဲႚ အီးမေးမြေိံးတမ်း တက့်ကအခဵက်အလက်ရအောင် တက့်ကအခဵက်အလကိရအောင် ရြာစမ်းရုပ်သံတြေ ဖမ်းရမသမ်းမဟိုံင်ထရမလို ထိုင်ရမလိုကိုင်ရမလို ဆုပ်ရမလိုလပ်ြရြ လပ်ြရနြဲႚဒုက္ခတြေ ပေဒြိုႚတတြေ ဘာတြေ လုပ်ရပ့ၝ။ူမန်မာေူပမြာ တဲ့၊ သံဃာတြေ တဲ့သံဃာတြေ သပိတ်မြောက်သတဲ့ဖိတ်ဖိတ်တောက် သကဿန်းတေအြူမင်ဆန်းပေစြ၊ ဘ၀င်ခဵမ်းလေစလြမ်းမတြေ တရိုးမြာမိုးရြာရြာ နေပူပူအလံဝၝတြေ ထူုကူပီူးပည်သူတေကြို လမ်ူးပ"ဧကပုတ္ဇ မနူရက္ခေ"တဦးတည်းသော သားသက်ဝေကိုသူႚမေမေ ရင်မြာထြေူးပီးအသက်ပေးတဲ့ မေတ္ဇာသဖယြ်ူပည်သူကို ကာကယြ် အံ့ဖယ်လိုက ဖယ်၊ မဖယ်လိုက လာလော့။အို ... လာလော့ ဘီလူး၊ သားစားကဵြးတိုႚဦူးပည်းကို ငုံႚ၊ ရန်တုံႚ မမူပည်သူကိုကည်ူဖစြိတ်နဲႚလက်ထိတ်ပဲ ခတ်လိုခတ်သေနတ်နဲႚ ပစ်လိုပစ်လြံစပ်ြနဲႚ ထိုးလို ထိုးမတ်သီလ မညိူးစေရအမဵြိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ကိုကမ္တာမြာ လန်းစေအံ့ဖမ်းလော့ ဆီးလော့သတ်လောူ့ဖတ်လော့ဒိုႚ မလ္တွောူ့ပီပေး ဟေ့ ...ူငိမ်းခဵမ်းရေးဝေးနီး ကမ္တာ တုန်ခၝ အုံ့သသံဃာ ဂုဏော၊ အနေိံ္ဇာ။သံဃာတော်မဵား၊ ဦးဆောင်သြာူးပီးကေဵာင်းသား ကေဵာင်းသူ၊ ခပ်ြဒေၝင်းထူပီစေဵးသား စေဵးသူ၊ ဆမြ်းကပ်လြူပီတောင်သူလယ်သမား၊ လုပ်သားသမဂ္ဂဖြဲႚလိုက်ုကလော့။စာရေးဆရာ၊ တေးရေးဆရာပၝမြ ပၝစ။ပန်းခဵီဆရာ၊ ဂီတဆရာပၝမြ ပၝစ။ဆရာဝန်၊ ကေဵာင်းဆရာပၝမြ ပၝမလား။အလုပ်သမား ရဲဘော် ခေၞပၝတော့စက်ရုံ သြားလော့။လယ်သမား ရဲဘော် ခေၞပၝတော့လယ်ယာ သြားလော့။စစ်ဗိုလ် စစ်သား စစ်တန်းလဵားသြားလိုႚ ခေၞစိုႚ။ုကံ့ဖြႚံတေရြော မဖြံႚတေရြောစမြ်းအားရင်ြရော မရင်ြရောရောြေိာံ ပၝခဵင်၊ ပၝပၝစေြေိာံင့်ယက်ြသူတြေ သတိထားစသည်အာူးဖင့် ...ဗဵာမဵား ရပ်ြပြေ၊ ဒိုႚတတြေူပည်ပနေတိုႚ စိတ်လပြ်ူပ(ူပည်)တငြ်းမြာကား သြေးခေဵာင်းအို ... ရဲဘော်တိုႚအခဵိန်ဆိုတာတုကိမ်သာ လာူမဲိံစ်ြခဵိန် လာူမဲ မရြိခေဵအခဵိန်နဲႚ ဒီရေလူတေကြို မစောင့်။တအောင့် တကရား၊ နားခငြ့်မရြိတယောင် ပေပေ၊ မတေဝြေိံငြ့်လာလေ လက်တြဲ၊ ဒီတပြဲမြာမပၝလိုက်ရ၊ မရြိုကနဲႚမသိလိုက်ရ၊ မရြိုကနဲႚထ လော့ လူတိုင်းသမိုင်း သင့်ကို ဆင့်ခေၞူပီ။လယ်တီဆရာတော်ဆင့်ခေၞစကား၊ သင်ုကားဖူးစ။"ခငြ့်သာဆဲမြ၊ မခဲခဵင်လ္တွင်အလြဲ နင့်ူပင် ရြိသေးလေလိမ့်လား။ခငြ့်သာစိုက်မြ၊ မလိုက်ခဵင်လ္တွင်အမိုက် နင့်ူပင် ရြိသေးလေလိမ့်လား။ခငြ့်သာတုန်းမြ၊ မရုန်းခဵင်လ္တွင်အရြံး နင့်ူပင် ရြိသေးလေလိမ့်လား။ ... "အို ... ရဲဘော်မဵားအားလုံးဝန်တာ၊ အားလုံးပၝစိုႚ။အားလုံးအတကြ် အားလုံးထက်ြလော့။လာ လော့ ရဲဘော်သမိုင်း သင့်ကို ခေၞခေဵူပီ။(စက်တင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၀၇)
Reactions: Cartoon for Burma - John Sherffius
Cartoon for Burma - John Sherffiushttp://cagle.com/news/MyanmarMassacre/5.asp
Reactions: ဇာနည်ဝင်း - သပိတ်မြောက် မိုးမခ
သပိတ်မြောက် မိုးမခဇာနည်ဝင်း(မိုးမခ ၀ိုင်းတော်သားမဵားကိုယ်စား …)စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ ဟုတ်ပၝတယ်၊ ခေၝင်းစဉ်တပ်ထားတဲ့အတိုင်းပၝပဲ၊ မိုးမခက သပိတ်မြောက်လိုက်ပၝ္ဘပီ။ ခေတ်သစ်ဖက်ဆစ်စနစ်ထူထောင်နေတဲူ့မန်မာူပည်စစ်အစိုးရကို သပိတ်မြောက်လိုက်ပၝ္ဘပီ။ ဘာအ႟ူးထတာလဲ၊ မင်းတိုႛက အစိုးရကိုဆန်ႛကဵင်္ဘပီးသားမဟုတ်လားလိုႛ စောဒကတက်ိုိံင်ပၝတယ်။ အေူဖကတောိုိံ့င်ငံတကာရောက်ူမန်မာူပည်သားတေကြ စစ်အစိုးရရဲႛ မိုက်႟ိုင်းရက်စက်မတြေကြို ကန်ႛကက်ြသလိုပၝပဲ၊ ကဵနော်တိုႛကလည်း ကန်ႛကကြ်႟ြံႛခဵပၝတယ်။ ကဵနော်တိုႛိုိံင်ငံအတကြ် တတ်ိုိံင်သလောက် လပ်ြရြားတဲ့သဘောပၝ။ ဆိံ္ဋကို ဖော်ထုတ်လိုက်တာပၝ။ သပိတ်မြောက်မီဒီယာ ရန်ကုန်္ဘမြိႛက စာနယ်ဇင်းသမားတခဵြိႛကတော့ အူဖစ်အပဵက်တေကြို မတ်ြတမ်းတင်နေုကပၝသတဲ့။ သူတိုႛတြေႛရိခြဵက်တေဟြာ အနာဂတ်မြာ အသုံးဝင်မယ်လိုႛ ယုံယုံကည်ုကည်နဲႛ မတ်ြတမ်းတင်နေုကပၝတယ်။ လောလောဆယ်မြာလည်း သူတိုႛပေးပိုႛတဲ့သတင်းအခဵက်အလက်တြေ၊ ဓာတ်ပုံတေကြို ကဵနော်တိုႛ ယူသုံးနေုကပၝတယ်။ သူတိုႛပိုႛလိုက်တဲ့ပုံတေဟြာ သတင်းအေဂဵင်စီတေကြတဆင့် ကမ္တာအြိံႛ သတင်းစာမဵက်ြိာံဖုံးပေၞ ရောက်နေပၝ္ဘပီ။ သူတိုႛဆီကတဆင့်ုကားရတာကူပည်တငြ်းက မီဒီယာအဖြဲႛတခဵြိႛ သပိတ်မြောက်ခဵင်တယ် တဲ့။ ဂဵာနယ်မထုတ်ဘူး၊ စာစောင်မထုတ်ဘူး၊ ခိုင်းတာတေပြဲ ထည့်ပေးရတာမဵားလနြ်းလိုႛ မထုတ်ဘူး၊ မလုပ်ိုိံင်ဘူး၊ သပိတ်မြောက်တယ်ပေၝ့။ူပည်တငြ်းက ဒီလိုအသံတေထြက်ြလာခဵိန်မြာူပည်ပမီဒီယာအဖြဲႛတေကြရော ဘာေူပာုကပၝသလဲ။ လောလောဆယ်တော့ မေူပာသေးပၝ။ေူပာတဲ့သူတော့ ရိလြာပၝ္ဘပီ။ ကဗဵာဆရာ ယောဟန်အောင်ူဖစ်ပၝတယ်။ " မိတ်ဆေမြဵားခင်ဗဵား … စစ်အစိုးရကို ဆန်ႛကဵင်ဆိံ္ဋူပနေုကတဲ့ သံဃာတော်မဵားရဲႛ ပတ္ဇိနိက္ကြ ဇ္ဆနကံဆောင်လပ်ြရြားမကြို ထောက်ခံတဲ့အနေနဲႛ နာမည်ကေဵာ်အိုံပညာရင်ြမဵားနဲႛအတူ ဘလော့ဂို ပိုးဝက် ဆရာယောဟန်အောင်လည်း သပိတ်မြောက်နေပၝ္ဘပီ။ ကဗဵာဆရာ၊ စာရေးဆရာ စာရင်းထဲမြာ ထည့်ပေုးကစေလိုပၝတယ်။ အရေးတော်ပုံ အောင်ပၝစေ။ " … တဲ့။ လန်ြခဲ့တဲ့ ၂ ရက်က သူႛရဲႛ ဘလော့ဂ်စာမဵက်ြိာူံဖစ်တဲ့ http://yaw-han-aung.blogspot.com မြာ ဖော်ူပလိုက်တာပၝ။ သပိတ်မြောက်ဘုန်းဋ္ဌကီူးပည်ပမြာရိတြဲူ့မန်မာူပည်သား ရဟန်းသံဃာအခဵြိႛလည်း ကံဆောင်သပိတ်မြောက်ေုကာင်း ခဵက်ခဵင်းေုကညာုက၊ အမန်ြတကယ် သပိတ်မြောက်ုကကန်ႛကကြ်ုကပၝတယ်။ူပည်ပရောက်သံဃာအမဵားစုကလည်း အဲသလိုသပိတ်မြောက်ုကမယ်ဆိုရင်တော့ လက်ရိလြပ်ြရြားမကြို အင်မတန် အထောက်အကူပမြာပၝ။ ဒီသံဃာတေရြဲႛ လပ်ြရြားမဟြာ သူတိုႛနဲႛ ထိတြေႛနေတဲူ့မန်မာူပည်သားအသိုင်းအ၀ိုင်းတေကြိုပၝ သြား္ဘပီး ႟ိုက်ခတ်ပၝလိမ့်မယ်။ ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းတေထြဲက ဒကာ ဒကာမတေကြူပည်ပမြာခဵည်းပဲနေုကတာမဟုတ်ပၝ၊ ရြေႛလဵားနေပၝတယ်၊ ကိုယ့်ိုိံင်ငံကို မုကာခဏူပန်ုကပၝတယ်။ူပည်ပမြာလည်း ကံဆောင်ူဖစ်ုကမယ်ဆိုရင် သေခဵာတာတစ်ခုကတော့ ကမ္တာအြိံႛူမန်မာသံ႟ုံးဝန်ထမ်း၊ သံတမန်တိုႛရဲႛ မိသားစု သာရေးနာရေးတေကြို သံဃာတော်တြေ ရကရြောက်ုကတော့မြာ မဟုတ်ပၝဘူး။ ခင်ဗဵားတိုႛ၊ ကဵနော်တိုႛ၊ သူတိုႛ ရန်ကုန်က သံဃာတ္ဘြေငိမ်းခဵမ်းစြာ မေတ္ဇာပိုႛဆိံ္ဋူပနေတုန်း ကဵည်ဆံထိ၊ နံပတ်တုတ်စာမ္ဘိပီး အဖမ်းခုံကရပၝတယ်။ အင်မတန်လက်သံေူပာင်တဲ့ စစ်ေုကာရေးစခန်းတေမြာ ရောက်နေပၝ္ဘပီ။္ဘပီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတငြ်း သံဃာတေထြဲကတခဵြိႛ ထောင်ခဵခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတေလြည်း ထက်ြလာပၝတယ်။ သူတိုႛက စစ်ဗိုလ်ခဵပ်ြမဵားကိုိုိံင်ငံရေးသမားတေနြဲႛ တြေႛဆုံဆြေးြေိံးဖိုႛ မေတ္ဇာရပ်ခုံကတာပၝ။ စစ်တန်းလဵာူးပန်နေဖိုႛေူပာတာမဟုတ်သေးပၝဘူး။ အခုတော့ လူတြေ ကိုးကယ်ြဆည်းကပ်ုကတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တေဟြာ သမံတလင်ုးကမ်းခင်းပေၞမြာ ထိုင်နေ၊ အိပ်နေ၊ အ႟ိုက်အိံက်ြခံနေရပၝတယ်၊ သကဿန်းကို ဆဲခြဋ္ဋတ်ခံရ္ဘပီး အကဿဵီလုံခဵည်နဲႛနေရပၝတယ်။ ခင်ဗဵားတိုႛရော ဘာလုပ်နေုကပၝသလဲ။ မိုးမခကတော့ စစ်အစိုးရကို သပိတ်မြောက်လိုက်ပၝ္ဘပီ။ ။
Reactions: ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်ိံငြ့် ကုလမဂြန်ဘာရီ ယခု တြေႚဆုံနေ ဟု စက်သတင်းမဵားက ဆို
ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်ိံငြ့် ကုလမဂြန်ဘာရီ ယခု တြေႚဆုံနေ ဟု စက်သတင်းမဵားက ဆိုမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ နေူပည်တော်မြ စစ်ခေၝင်းဆောင်မဵာိးံငြ့်တြေႚအူပီး ရန်ကုန်သိုႚ အရောက် ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည် အိမ်တငြ် တြေႚဆုံသည်ဟု အေပီ သတင်းက ဆိုပၝသည်။ ထပ်မံ သတင်းပိုႚပၝမည်။ ဒီမြာုကည့်ပၝ - Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
Reactions: စစ်အစိုးရအား အထောက်အပံူ့ပမြ ရပ်ဆိုင်းရေး ဆိံ္ဋူပပြဲ ဆန်ဖရန်စင်္စကို တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတငြ်ူပလြုပ်
စစ်အစိုးရအား အထောက်အပံူ့ပမြ ရပ်ဆိုင်းရေး ဆိံ္ဋူပပြဲဆန်ဖရန်စင်္စကို တရုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတငြ်ူပလြုပ်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ တရုတ်အစိုးရအနေူဖင့်ူမန်မာစစ်အာဏာပိုင်မဵားအား အကာအကယ်ြပေးခဲူ့ခင်ိးံငြ့်ပတ်သက်၍ ဆန်ႛကဵင်ဆိံ္ဋူပပြဲတစ်ရပ်ကို အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု ကယ်လီဖိုးနီးယာူးပည်နယ် ဆန်ဖရန်စင်္စက္ဘိုမြိႛတငြ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေႛကူပလြုပ်ခဲ့သည်။ တရုတ်ူပည်သူႛသမ္ထတိုံင်ငံ ကောင်စစ်ဝန်ရုံးရေႚြ၌ နံနက် ၁၀ နာရီခြဲမြ မနြ်းလြဲ ၁ နာရီခြဲအထိ ထပ်မူံပလြုပ်သည့် ယင်းဆိံ္ဋူပပြဲသိုႛ ဆန်ဖရန်စင်္စကို ပင်လယ်ကြေႛ၀န်းကဵင်ဒေသရြိုံင်ငံရေးအဖြဲႛအစည်းဝင်မဵား၊ူမန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးလပ်ြရြားသူမဵား၊ တက္ကသိုလ်ိံငြ့် ကောလိပ်မဵားတငြ် တက်ရောက်သင်ုကားနေသည့်ူမန်မာကေဵာင်းသားမဵား၊ ရဟန်းတော်ိံငြ့် ယောဂီမဵား၊ ဒေသခံ အမေရိကန်မဵား စုစုပေၝင်း ၃၀၀ ကေဵာ် တက်ရောက်ခဲု့ကသည်။ ယင်းဆိံ္ဋူပပြဲသည် ဆန်ဖရန်စင်္စကို ပင်လယ်ကြေႛပတ်ဝန်းကဵင်၌ူပလြုပ်ခဲ့သမ္တွသော ဆိံ္ဋူပပြဲတငြ် အဋ္ဌကီးမားဆုံူးဖစ်သည်။ ဆိံ္ဋူပပြဲအတငြ်း သံဃာတော်မဵားကိုပင် ရက်ရက်စက်စက်ြိံပ်စက်ခဲ့သည့်ူမန်မာစစ်အစိုးရအား တရုတ်ိုံင်ငံ၏ ကာကယ်ြပေးမမြဵာိးံငြ့် ပတ်သက်၍ူပင်းထန်စြာ ရတ်ြခဵုက္ဘပီး၊ူမန်မာူပည် ဒီမိုကရေစီရေးေူပာင်းလဲမအြတကြ် တရုတ်ိုံင်ငံက အကူအညီပေးရန် တောင်းဆိုခဲု့ကသည်။ သိုႚမဟုတ်ပၝက တရုပ်အိုလံပစ်အစီအစဉ်ကို သပိတ်မြောက် ရမည်ူဖစ်ေုကာင်း ဟစ်ကေ့းခဲု့ကသည်။ ထိုသိုႛ တောင်းဆိုရေကြးေုက်ာမအြူပင်ူမန်မာူပည်္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးအတကြ် မေတ္ဇာပိုႛ ဆုတောင်ူးခင်းမဵားလည်ူးပလြုပ်ခဲု့ကသည်။ ဆိံ္ဋူပပြဲူပလြုပ်သည့်နေႛသည်ူပည်တငြ်ူးပည်ပရြိူမန်မာမဵား အနီရောင်အကဿဵီဝတ်ဆင်ရန်ြိံးဆော်ထားသည့် ရက်ိံငြ့် တိုက်ဆိုင်ခဲ့္ဘပီး ဆိံ္ဋူပသူ မဵားစြာက အနီရောင်အကဿဵီမဵား ၀တ်ဆင်ူခင်း၊ သကဿန်းရောင် ပိတ်စမဵား္ဘခံလြမြ်ူးခင်းမဵာူးပလြုပ်ခဲု့ကသည်။ူမန်မာ့အရေးအတကြ် မဋ္ဌကံစြဖူး မဵာူးပားစြာ ဆိံ္ဋူပုကသူဖင့် ရဲအစောင့်အုကပ် ပိုမိုရောက်လ္ဘာပီး တာဝန်ယူသကဲ့သိုႛ ဒေသခံ သတင်းစာမဵား၊ ရေဒီယိုံငြ့် ရုပ်ူမင်သုံကားဌာနမဵားမြ သတင်းထောက်မဵားလည်း ရောက်ရြိ မတ်ြတမ်းတင်ခဲု့ကသည်။
Reactions: အင်ဒီယာနာူပည်နယ် ဖိုႛတ်ဝိန်း၌ ဆုတောင်းပြဲူပလြုပ်
အင်ဒီယာနာူပည်နယ် ဖိုႛတ်ဝိန်း၌ ဆုတောင်းပြဲူပလြုပ်မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ူမန်မာူပည်တငြ်း လက်နက်ကိုင်တိုႛ၏ ရက်စက်စြိာိံမ်နင်းမြေုကာင့် ကယ်ြလန်ြခဲ့ရသူမဵာိးံငြ့်ူမန်မာူပည်္ဘငိမ်းခဵမ်းရေးအတကြ် ဆုတောင်းပြဲတစ်ရပ်ကို အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု အင်ဒီယာနာူပည်နယ် ဖိုႛတ်ဝိန်း္ဘမြိႛ၌ ကဵင်းပခဲ့ရာ လူ ၃၀၀ နီးပၝး တက်ရောက်ခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေႛ ည ၈ နာရီတငြ် စတင်ူပလြုပ်သည့် ယင်းဆုတောင်းပြဲကို ဖိုႛတ်ဝိန်း္ဘမြိႛ တရားရုံးရြေႚေူမကက်ြလပ်တငြ်ူပလြုပ်ခဲူ့ခင်ူးဖစ်္ဘပီး ဗုဒ္ဌဘာသာ ဘုန်းဋ္ဌကီးကေဵာင်း ၆ ကေဵာင်းမြ သံဃာတော်မဵား၊ ဗုဒ္ဌဘာသာဝင်မဵာိးံငြ့်အတူ ခရစ်ယာန်၊ မူဆလင်၊ မဟာမေဒင်ဘာသာဝင်မဵားပၝ တက်ရောက်ခဲု့ကသည်။ အခမ်းအနာိးံငြ့်ပတ်သက်၍ အခမ်းအနားသိုႛ တက်ရောက်ခဲ့သူ တေးသံရငြ် မာမာအေးက ယခုကဲ့သိုႛေူပာူပခဲ့သည်။ "ကဵန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်မြာ ကဵမတိုႛုကားရတဲ့အတိုင်း နိဗ္တာန်ဝင်သြားရြ္ဘာပီူဖစ်တဲ့ သံဃာတော်မဵားနဲႛ သာသနာအတကြ် ဒီမိုကရေစီအတကြ် အသက်ပေးသြာုးကတဲ့ လုပ်သာူးပည်သူမဵား၊ ကေဵာင်းသားကလေးမဵား အားလုံးအတက်ြကို ဒီနေႛ ကဵမတိုႛဟာ ရင်ထဲအူပည့်ရြိသော မေတ္ဇာမဵားနဲႛ ဆုတောင်းမေတ္ဇာ ပိုႛုကပၝတယ်" အခမ်းအနားတငြ် တက်ရောက်လာသူမဵားက မေတ္ဇာသုတ်ရတ်ြဆို၍ မီးတိုင်မဵား ထနြ်းညြိကာ ဆုတောင်းမေတ္ဇာပိုႛသခဲု့ကသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေႛက ဖိုႛတ်ဝိန်း္ဘမြိႛရြိ ဗမာဘုန်းတော်ဋ္ဌကီး ၂ ကေဵာင်း၊ မန်ြဘုန်းတော်ဋ္ဌကီးကေဵာင်း ၂ ကေဵာင်း၊ လေိာံငြ့် သီရိလကဿာကေဵာင်းမဵားတငြ် သံဃာတော်မဵား စုဝေး၍ သပိတ်မြောက်ကံ ဆောင်ခဲု့ကသည်။
Reactions: န၀တစစ်တပ်၏ သကဿန်းဝတ်မဵာူးဖင့် အစားထိုး
ရန်ကုန်ူမြိႚ ဘုန်ုးကီးကေဵာင်းမဵားကို ရငြ်းလင်ူးပီးန၀တစစ်တပ်၏ သကဿန်းဝတ်မဵာူးဖင့် အစားထိုးမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃စက်တင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇ သတင်းမြောင်ခဵူပီး ဆက်သယ်ြရေူးဖတ်တောက်ထားသော ၂၈၊ ၂၉ ရက်နေႚမဵားအတငြ်း န၀တ စစ်တပ်မဵားက ရန်ကုန်ူမြိႚတ၀မြ်းရြိ ဘုန်းတော်ုကီးကေဵာင်းမဵားမြ သံဃာမဵားကို ဖမ်းဆီးလိုက်ူပီးနောက် ကေဵာင်းဝင်းမဵားကို ပိတ်ဆိုႚထားခဲ့သည်။ ရပ်ကက်ြနေလူထုက ဘုန်ုးကီးကေဵာင်းမဵားကိုပန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်ုကြိးစာုးကသော်လည်း စစ်တပ်က သေနတ်ူဖင့် ပစ်ခတ်သူဖင့် အသေအပေဵာက်မဵားစြာူဖင့် ဆုတ်ခြာခဲ့ရသည်ဟု မဵက်ူမင်သက်သေ တစ်ဦးကေူပာုကားသည်။ သေဆုံးသူမဵားအနက် အလောင်းမဵားကို အူမန်သူဂိလ်ြရန် အမိန်ႚထုတ်ေုကာင်း၊ ဆင်းရဲသောအိမ်မဵားကိုမန်မာငြေ ၃ သောင်း ပေူးပီး အလောင်းကို သိမ်းဆည်းသြားေုကာင်း၊ စစ်တပ်လက်ထဲကဵခဲ့သော သေဆုံးသူမဵားကိုပန်တောင်းလိုႚ မရေုကာင်း၊ ၄င်းကေူပာုကားခဲ့သည်။ မိုးကောင်းကေဵာင်းထိုင်ဆရာတော်မဵာူးဖစ်သော ဦးဝိသလိံငြ့် ဦးစိံ္ဋိမာတိုႚိံစြ်ဦး စလုံး ပဵံလန်ြတော်မူခဲူ့ပီူဖစ်သည်ဟု သူက ဆက်ေူပာသည်။ ဘုန်ုးကီးကေဵာင်းမဵားတငြ် သက်ဝၝုကီး သံဃာမဵားသာ ကဵန်ရစ်ခဲ့သည်ဟု ယူဆိုံင်ူပီး ဆမြ်းကမြ်း အဆက်အသယ်ြမဵာူးဖတ်တောက်ထားသည်။ ရပ်ကက်ြရြိူပည်သူမဵားက နံနက်စောစော ဆမြ်းခံထက်ြလာသူ ကိုရင်ကလေး တပၝးစိံစ်ြပၝးစကို ခဲခဲယဉ်းယဉ်း ရြာဖြေူပီး ဆမြ်းမဵား တဆင့်ကပ်နေရသည်ဟု သိရသည်။ ဖမ်းဆီးထားသော ကိုရင်ကလေးမဵားကို အထုပ်အပိုးမဵာိးံငြ့်ူပင်ဆင်ူပီး နယ်မဵားသိုႚူပန်လတ်ြလိုက်သော်လည်း ရဟန်းသံဃာတော်မဵားကိုမူ သပိတ်လန်ြရန် သိုႚမဟုတ်ပၝက သိက္ခာခဵလူထက်ြရန် ၂ ခုသာ ရြေးခိုင်းေုကာင်း၊ ဆေးဝၝးကုသခငြ့်ိံငြ့် ဆမြ်းကမြ်း ဆက်ကပ်မကြို သပိတ်မြောက် သံဃာမဵားက လက်ခံမည် မဟုတ်သူဖင့်ူမန်မာလူထုတရပ်လုံးက စိုးရိမ်နေသည်ဟု မိုးမခသိုႚ ပရိသတ်မဵားက တညီတညတ်ြတည်းေူပာုကားပၝသည်။ ယနေႚမနက်ကစူပီး ဘုန်ုးကီးကေဵာင်းအခဵြိႚတငြ် န၀တမြ စေလတ်ြသော သကဿန်းဝတ်မဵား ရောက်ရြိလာေုကာင်း၊ ယခင် ရပ်ကက်ြက သိကဋ္ဋမ်းသော သံဃာတော်မဵား မဟုတ်ေုကာင်း၊ ရပ်ကက်ြနေလူထုကလည်း သံသယုကီးစြာူဖစ်နေရေုကာင်ိးံငြ့် အိမ်တိုင်း အိမ်တိုင်းတငြ် မိမိတိုႚ ဘုရားစင်မဵားက ရုပ်ပြားတော်မဵားကို အိမ်ရြေႚသိုႚပင့်ူပီး ရေ သပၝဍ္ဎယ်ူခင်း၊ ပရိတ်တရားမဵား ရတ်ြဆိုခင်း၊ အမ္တွအတန်း ပေးဝေူခင်းတိုႚ တညီတညတ်ြတည်ူးပလြုပ်လဵက်ရြိသည်ဟု သိရပၝသည်။ "ကဵမတိုႚ ငိုစရာ မဵက်ရည်တေလြည်း မရြိတော့ပၝဘူး၊ ကဵမတိုႚ ကိုးကယြ် ဆည်းကပ်စရာ ဘာသာတရားနဲႚ ဆရာတော်တေလြည်း မရြိတော့ပၝဘူးရငြ်။ ကဵမတိုႚမြာ ကဵန်ရစ်တာ ဘုရားစင်ပေၞက ဆင်းတုတော်တေပြဲ ရြိပၝတော့တယ်" ဟု မိုးမခသိုႚႛ ပရိသတ်တစ်ဦးက ငိုကေ့းရင်းေူပာုကားခဲ့ပၝသည်။
ူမန်မာမဵားလပ်ြရြားမကြို စကဿာပူ ရဲမဵားက ကန်ႚသတ်စက်ြဖက်လာူပီ။ န၀တ စမြ်းအားရင်ြမဵာုးကံႚဖြံႚမဵား ကဲ့သိုႚ
ူမန်မာမဵားလပ်ြရြားမကြို စကဿာပူ ရဲမဵားက ကန်ႚသတ်စက်ြဖက်လာူပီ။ န၀တ စမြ်းအားရင်ြမဵာုးကံႚဖြံႚမဵား ကဲ့သိုႚ ကဵနော်တိုႚကိုြေိာံက်ယက်ြဟု ကေဵာင်းသားတစ်ဦးကေူပာဆို<?xml:namespace prefix = o />မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃စက်တင်ဘာ ၂၉၊၂၀၀၇မိခင်တိုင်ူးပည်တငြ်ူဖစ်ပြားနေသော စစ်အစိုးရ၏ ရဟန်းသံဃာ ကေဵာင်းသာူးပည်သူမဵားအပေၞ အုကမ်းဖက်ြိံမ်ိံငြ်း သတ်ူဖတ်နေမမြဵားကို စကဿာပူရောက်ူမန်မာမဵားက ဆန်ႚကဵင်ကန်ႚကက်ြနေုကခဵိန်တငြ် စကဿာပူအစိုးရကလည်း ထိုလပ်ြရြားမမြဵားကို ကန်ႚသတ်ခဵပ်ြခဵယ်ူခင်း၊ ၀င်ရောက်စက်ြဖက်တာူးမစ်ူခင်းတိုႚူပလြုပ်လာေုကာင်ုးကားသိရပၝသည်။ယနေႚကူမန်မာစာသားမဵာိးံငြ့် အကဵီအနီ တြဲဖက်ဝတ်ဆင်လာသူမဵားကို စကဿာပူရဲက အ၀တ်လဲခိုင်ူးခင်း၊ ခဵိန်းေူခာက်ူခင်း၊ူမန်မာမဵား ကဵက်စားရာ ပင်နီဆူးလားပလာဇာတငြ်ူပည်ပရောက်ူမန်မာအတိုက်အခံ သတင်း အင်တာနက်ဆိုက်မဵားကို ကိုယ်ပိုင်ကန်ြပဵတြာမဵာူးဖင့်ုကည့်ရနြေပၝက ရဲမဵားက လိုက်လူံပီး ပိတ်ခိုင်ူးခင်း၊ အြေိာံက်အယက်ြပေူးခင်းတိုႚ ကိုပလြုပ်နေုကသည်ဟု မိုးမခသိုႚူမန်မာအလုပ်သမားတစ်ဦးကေူပာုကားသည်။အခဵြိႚသောူမန်မာမဵားက ရဲစခန်းသိုႚလိုက်ပၝူပီး ဖိအားပေး မေးသည့်အခၝ စီအိုင်ဒီက အမိန်ႚဟုေူပာုကားသောလည်း အမိန်ႚကို စာူဖင့်လည်း မူပိုံင်ဟု သိရသည်။ ထိုႚအူပင် စကဿာပိူိုံင်ငံတငြ် နေထိုင်ူပီး အူခားတိုင်ူးပည် အရေးကိင်္စမဵားကို ၀င်ရောက်စက်ြဖက်သည့် တရားမ၀င် ငေအြလခြူံခင်း၊ လူအမဵားစုဝေူးခင်းတိုႚ မလုပ်ရေုကာင်း လည်း ရဲစခန်းကေူပာုကားသည်ဟု ၄င်းက ဆက်လက်ေူပာုကားသည်။ူဖစ်စဉ်ကိုကည့်ရလ္တွင်၊ူမန်မိာိုံင်ငံ ၏ ဘာသာရေိးံငြ့်ိုံင်ငံရေး အုကပ်အတည်းမဵား၊ူပသနာမဵားကို စကဿာပူအစိုးရက အနီးကပ် စောင့်ုကည့်နေပုံရေုကာင်း၊ စကာဿပူရောက်ူမန်မာအမဵားစု၏ တက့်ကမကြိုလည်း စိုးရိမ်နေပုံရေုကာင်း၊ ထိုႚအတကြ် သတင်းစိာံငြ့် ရုပ်သံတိုႚတငြ်ူမန်မာသတင်းကို ထိန်ခဵန်ူပီး ရြောင်ရြားတင်ူပထားသည်တိုႚကို တြေႚနေရေုကာင်း၊ အခုအခဵိန်တငြ် စကဿာပူရဲကို အသုံးခဵူပီူးမန်မာမဵားကို ကန်ႚသတ်စက်ြဖက်မမြဵား လုပ်လာသည်မြာူမန်မာစစ်အစိုးရိံငြ့် စကဿာပူတိုႚ နီးကပ်သည့် ဆက်ဆံရေး ရြိသည်မြာ ထင်ရြားနေေုကာင်း ကေဵာင်းသားတစ်ဦးက သုံးသတ်ူပသြားသည်။တရုပ်ိုံင်ငံ အူပင် တပၝတီ အာဏာရငြ်ိုံင်ငံအမဵားစုဖင့်ဖြဲႚထားသည့် အာဆီယိံိုံင်ငံမဵားကလည်ူးမန်မာူပည် ဒီမိုကရေစီရေးကို ဦးတည်သည့် လပ်ြရြားမမြဵာိးံငြ့် ပတ်သက်ူပီး ၄င်းတိုႚ အာဏာ ရေရညြ်ိုံင်ရေးအတကြ် စိုးရိမ်မကင်ူးဖစ်နေပုံရသည်ဟု ၄င်းကေူပာုကားပၝသည်။
Reactions: MaSoe Rein Sa Ya Daw Gyi's Speech
MaSoe Rein Sa Ya Daw Gyi's Speech to continue the Boycott of the monks ....
Reactions: ကိုလိုရာဒိုပည်နယ်ရောက်ူမန်မိာိုံင်ငံသားမဵား ဆိံ္ဋူပ
ကိုလိုရာဒိုပည်နယ်ရောက်ူမန်မိာိုံင်ငံသားမဵား ဆိံ္ဋူပမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂စက်တင်ဘာ ၂၉။ ၂၀၀၇ူမန်မိာိုံင်ငံတငြ်ူးဖစ်ပြားနေသည့် ဆိံ္ဋူပပြဲမဵားကို ထောက်ခံေုကာင်ိးံငြ့် ထိုဆိံ္ဋူပပြဲမဵားကို စစ်အစိုးရက အုကမ်းဖက်သတ်ူဖတ်မမြဵားကို ဆန်ႛကဵင်ေုကာင်း ဆိံ္ဋူပပြဲတရပ်ကို အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု ကိုလိုရာဒိုပည်နယ်ရြိူမန်မိာိုံင်ငံသားမဵား ယနေႛ ကဵင်းပခဲ့သည်။ နေႛလည် ၂ နာရီမြ ၄ နာရီအထိ ကဵင်းပခဲ့သည့် အဆိုပၝဆိံ္ဋူပပြဲတငြ် လူအင်အား ၅၀ နီးပၝး ပၝ၀င်ခဲ့္ဘပီး ကော်လိုရာ ဒိုပည်နယ်ူမြိႚတော် ဒန်ဗာူမြိႚရြိူုမြိႛတော်ခန်းမရြေႛတငြ် သြားရောက်ဆိံ္ဋူပခဲူ့ခင်ူးဖစ်သည်။ "ူမန်မာူပည်မြာူဖစ်ပေၞနေတဲ့ ဆိံ္ဋူပပြဲတေကြို ထောက်ခံေုကာင်ိးံငြ့် စစ်အစိုးရရဲႛ အုကမ်းဖက်သတ်ူဖတ်နေတာကို ရပ်တန်ႛဖိုႛအတကြ် ဆိံ္ဋလာူပတာပၝ" ဟု ဆိံ္ဋူပသူတဦးက မိုးမခသိုႛေူပာဆိုသည်။ နောက်ထပ် ဆိံ္ဋူပလပ်ြရြားမမြဵား ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သြားရန် အစီအစဉ်မဵားလည်းရြိေုကာင်း သိရြိရသည်။
Reactions: စကဿာပူရောက်ူမန်မာမဵား သဘောထာူးပတ်သားရန်လိုဟု ဝေဖန်ခံရ
သံဃာိံ့ငြ့်ူပည်သူတိုႚ သြေးေူမကဵရသည့် စစ်တပ်၏ိုံင်ငံတော်လုပ်ုကံမြုကီး အပေၞ စကဿာပူရောက်ူမန်မာမဵား သဘောထာူးပတ်သားရန်လိုဟု ဘလော့ဂ်ဂၝဆိုက်တစ်ခုမြ ဝေဖန်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇သောုကာနေႚကိုံင်ငံတကာရောက်ူမန်မာမဵာိးံငြ့် လူသားခဵင်းစာနာသော မိသားစုမဵား၊ အဖြဲႚအစည်းမဵား စုစည်ူးပီူးမန်မာစစ်အာဏာပိုင်မဵား၏ သံဃာတော်မဵာိးံငြ့်ူပည်သူလူထုအပေၞ လုပ်ုကံသတ်ူဖတ်မမြဵားအား ဆန်ႚကဵင်ရြံႚခဵပြဲမဵား တခဲနက်ကဵင်းပခဲု့ကသည်။ စကဿာပူရောက်ူမန်မာမဵားကလည်ူးမန်မာဘုန်းတော်ုကီးကေဵာင်းမဵားတငြ် စုဝေူးပီး သပိတ်မြောက်သံဃာတော်မဵာိးံငြ့် ဒၝယကာမဵားအတကြ် ဆုတောင်းပြဲမဵား၊ အခမ်းအနားမဵား ကဵင်းပနေသည့်အခဵိန်တငြ် ရန်ကုန်မြူပန်လာသောူမန်မာခရီးသည်အခဵြိႚကမူ တိုင်ူးပည်မြာ အေးခဵမ်းေုကာင်း၊ မိမိတိုႚ စကဿာပူတိုင်ူးပည်တငြ် အေးခဵမ်းစြာ ရြာဖေစြားသောက်နေရသူဖင့် ကေဵနပ်ေုကာင်း၊ ဘယ်အရေးအခင်းမြ မရြိေုကာင်းကိုပြံးပေဵာ်ရင်ြစြာူဖင့် စကဿာပူသတင်းဌာနမဵားကိုေူဖုကားနေသည်ကို သတင်းရုပ်ူမင်တိုႚက ဖော်ူပနေသည်။ ထိုႚအတကြ်ေုကာင့် စကဿာပူအေူခစိုက်ူမန်မာဘလော့ဂ်ဂၝဆိုက် တစ်ခုက မိုးမခသိုႚ ဓာတ်ပုံမဵာိးိံငြ်းယဉြ်ူပသူပီး၊ူပည်ပရောက်ူမန်မာအမဵြိးသားမဵားအနေူဖင့် အမဵြိး၊ ဘာသိာံငြ့် သာသနာကို မည်သည့်နည်ိးံငြ့် ကာကယ်ြထိမ်းသိမ်ုးကမလဲ ဆိုသည့် မေးခနြ်းအတကြ်ူပတ်သားသော အေူဖပေုးကရန် လိုနေူပီဟု ထင်ူမင်ခဵက် ထုတ်ဖော်သြားပၝသည်။ူပြံးပေဵာ်နေသော သူတိုႚိံငြ့် ရုပ်ူမင်အစီအစဉ်ကို ဒီမြာုကည့်ပၝ
Reactions: Semtember 28, 2007 - Public Defiance continues
စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ရန်ကုန်ူမြိႚ ဆိံ္ဋူပပြဲမဵာူးမင်ကငြ်းမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ ယမန်နေႚက အင်တာနက်လိုင်းမဵားပိတ်ထားသူဖင့် သတင်းမဵားကို ဓာတ်ပုံမဵာိးံငြ့်အတူ ဖော်ူပခငြ့်မရခဲ့ပၝ။ ယခု စုဆောင်းထားသမ္တွကို တင်ူပလိုက်ရပၝသည်။ ဗိုလ်ခဵပ်ြလမ်ိးံငြ့်သိမ်ူဖလြမ်း တိုႚတငြ် အစိုးရဆန်ႚကဵင်ရေး ဆိံ္ဋူပပြဲမဵားကိုပည်သူလူထုက ဆင်ြိဲံခဲ့သည်။ အမဲစေဵးကုန်းနားတငြ် စစ်တပ်ိံငြ့် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်တြေႚႛရာတငြ်၊ သေနတ်ူဖင့် အခဵက်ပေၝင်းမဵားစြာ ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ အူပင်ထကြ်ုကည့်နေသော ၀န်ထမ်းအိမ်ယာမဵားမြ လူ ၂၀ ကိုဖမ်းဆီးလိုက်သည်။ တောင်ဥက္ကလာ ငြေုကာယံကေဵာင်းတိုက်ရြေႚတင်ြလည်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မမြဵာူးဖစ်ပြားခဲ့သည်။
Reactions: အမေရိကန်ိုံင်ငံ၊ နယူးယောက်မြူမန်မာမဵား ဆိံ္ဋူပပြဲ ကဵင်းပ
အမေရိကန်ိုံင်ငံ၊ နယူးယောက်မြူမန်မာမဵား ဆိံ္ဋူပပြဲ ကဵင်းပူမန်မိာံငြ့် အမေရိကန်မဵား ၇၀၀ ကေဵာ် တက်ရောက်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ဓာတ်ပုံသတင်း စစ်အစိုးရကို ဆန်ႚကဵင်ေုကာင်း၊ သံဃာတော်မဵား၏သပိတ်ကို ထောက်ခံ ပံ့ပိုးလဵက်ရြိေုကာင်ိးံငြ့်ိုံင်ငံတကာမြ အူမန်ဆုံးအရေးယူဆောင်ရက်ြပေးရန် ဆိံ္ဋမဵား ထုတ်ဖော်ူပသုကသည်။ သံဃာတော်မဵား သြေးေူမကဵရသည့် ၀မ်းနည်းသော အထိမ်းအမတ်ြအူဖစ် အနီရောင် ၀တ်စုံမဵား ၀တ်ဆင်လာုကသည်။
Mar Mar Aye - Song Dedicated to Boycott Monks
Reactions: ကုလသမဂ္ဂက ဖငြ့်လစ်ြပေးထားသည့် အောက်ပၝ တယ်လီဖုန်းလိုင်းမဵားသိုႛဆက်သယ်ြပၝ
ူမန်မာူပည်တငြ်း အီးမေးလ် အင်တာနက်လိုင်းမဵား၊ တယ်လီဖုန်းမဵာူးဖတ်တောက်မြေုကာင့်ူပည်တငြ်ူးပည်ပိံငြ့် ဆက်သယ်ြရန် အခက်အခဲရြိသူမဵား ကုလသမဂ္ဂက ဖငြ့်လစ်ြပေးထားသည့် အောက်ပၝ တယ်လီဖုန်းလိုင်းမဵားသိုႛဆက်သယ်ြကာ အေုကာင်းကိင်္စမန်ြသမ္တွေူပာုကာိးိုံင်ပၝသည်။ ၅၅၄၅၉၇ ၅၅၄၆၂၅
Reactions: စကဿာပူရောက်ူမန်မာမဵာူးပည်ပရြိ စစ်အစိုးရ မိသားစိုံငြ့် အဆက်အသယ်ြမဵားကိုေူခရာခံ
စကဿာပူရောက်ူမန်မာမဵာူးပည်ပရြိ စစ်အစိုးရ မိသားစိုံငြ့် အဆက်အသယ်ြမဵားကိုေူခရာခံ မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ယမန်နေႚက စတင်ူပီး အင်တာနက်စနစ်ကို စစ်တပ်က ပိတ်ပစ်လိုက်ူပီးနောက်ူပည်တငြ်းမြ သတင်းပိုႚသူမဵာိးံငြ့်ူပည်ပရောက်ူမန်မာတိုႚ သတင်းအဆက်ူပတ်သြားခဲ့သည်။ တယ်လီဖုံးမဵာိးံငြ့် သတင်းစုံစမ်း၍ ရသော်လည်း ဓာတ်ပုံမဵား၊ ရုပ်သံအပိုင်းမဵား မတြေႚရသူဖင့် အားမရူဖစ်ရသည်ဟု စကာဿပူကူမန်မာတစ်ဦးကေူပာုကားသည်။ သိုႚရာတငြ် သည်အတိုင်းထိုင်မနေပဲူပည်တငြ်းက ရဟန်းရင်ြလူတိုႚ၏ အထေထြေသြပိတ်ကို ထောက်ခံလဵက်ရြိသောူမန်မာ့အရေးလပ်ြရြားသူမဵားက စင်ကာပိူိုံင်ငံတငြ်းရြိ စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမဵား၊ စာရင်းမဵာိးံငြ့် အဆက်အသယ်ြမဵားကို စတင်ေူခရာခံ စုံစမ်းနေူပီဟုမန်မာအလုပ်သမားတစ်ဦးက မိုးမခသိုႚ သတင်းပေးလာသည်။ူပည်ပတငြ် သပိတ်စခန်းမဵား မဖငြ့်ိုံင်၊ စကဿာပူလိုိုံင်ငံမဵားတငြ် သံရုံးရြေႚ ဆိံ္ဋသြား မူပိုံင်သော်လည်ူးပည်တငြ်းက ဆင်ြိဲံနေသည့် အထေထြေသြပိတ်ကို ဆက်လက် ထောက်ခံေုကာင်း၊ စစ်အစိုးရ၏ ရဟန်းသံဃာတိုႚအပေၞ လုပ်ုကံသတ်ူဖတ်နေမမြဵားကို ကန်ႚကကြ်ေုကာင်ိးံငြ့် မည်သည့်နည်ိးံငြ့်မဆို စစ်တပ်အသိုင်းအ၀ိုင်းမိသားစုမဵားကို ဆန်ႚကဵင် သပိတ်မြောက်ရမည်ူဖစ်ေုကာင်ူးပည်ပရောက်ူမန်မာမိသားစုမဵားက တညီတညတ်ြတည်း ဆောင်ရက်ြရမည် ဟု စကဿာပူရြိူမန်မာအရေးလပ်ြရြားသူမဵားက မိုးမခ သိုႚေူပာုကားခဲ့သည်။ ယခု သူတိုႚ မိတ်ဆေမြဵား ပေးပိုႚလိုက်သည့် ဓာတ်ပုံမဵားတငြ် စစ်တပ်ိံငြ့် စီးပြားဖက် ဦးတေဇ ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု အမည်ထက်ြသော အိမ် ၂ လုံိးံငြ့် အဲယားပုဂံ ရုံးခမ်းတိုႚကို ပၝ၀င်သည်ကို တြေႚရသည်။ လိပ်စိာံငြ့် စာရင်းမဵားကို ဆက်လက်ပေးပိုႚပေးမည် ဟုေူပာဆိုခဲ့သည်။
Reactions: မာမာအေး -ူပည်သူမဵားနဲႛ သံဃာမဵားနဲႛ အ္ဘမဲတမ်းအတူ ရြိနေမယ်
ူပည်သူမဵားနဲႛ သံဃာမဵားနဲႛ အ္ဘမဲတမ်းအတူ ရြိနေမယ်မာမာအေးစက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ လက်ရြိူဖစ်ပေၞနေသည့်ူမန်မာူပည်တငြ်း္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာဆိံ္ဋူပမမြဵာိးံငြ့် သံဃာတော်မဵားအပၝအ၀င်ူပည်သူလူထုအား စစ်အစိုးရ၏ုကမ်းတမ်းစြ္ဘာဖိခြဲခဲ့မမြဵာိးံငြ့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်ူပည်ထောင်စုသိုႛ ရောက်ရြိနေသူ တေးသံရင်ြမာမာအေး၏ေူပာုကားခဵက်အား ဖော်ူပပၝသည်။ ခဵစ်မိတ်ဆေမြဵားရငြ် … ကဵမ မာမာအေးပၝ။ ဒီနာမည်ုကားလိုႛရြိရင် ကဵမရဲႚမိတ်ဆေမြဵား အားလုံး မတ်ြမိုကလိမ့်မယ်လိုႛ ထင်ပၝတယ်။ ဒီနေႛဒီခဵိန်မြာ ကဵမတိုႛိုံင်ငံမြာ သာသနာရေးနဲႛပတ်သက်တဲ့ ဒုက္ခအခက်အခဲတြေူဖစ်နေတာ တကမ္တာလုံး သိနေပၝ္ဘပီ။ ကဵမတိုႛလည်း သိနေုကားနေူမင်နေရပၝတယ်။ အဲဒီအတက်ြကို အင်မတန်မြ စိတ်မခဵမ်းမသာူခင်း ဋ္ဌကီးစြာူဖစ်ရပၝတယ်။ ကဵမဆိုရင် ကဵမရဲႚိံလြုံးကို ခြဲထားတာ ၃ လပဲ ရြိပၝသေးတယ်။ မနေႛကနဲႛ ဒီကနေႛ ၂ ရက် အင်တာနက်က သတင်းတြေုကားရတာ၊ ဓာတ်ပုံတေကြိုမင်ရတာကိုကည့်္ဘပီးတော့ ကဵမူပန်္ဘပီးတော့ ရောဂၝတောင်ူပန်္ဘပီးတက်တဲ့ဘ၀ ရောက်နေပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် ကဵမဟာ စိတ်ဓာတ်အာူးဖင့် အဲဒီူမန်မိာိုံင်ငံမြာ လပ်ြရြားနေုကတဲ့ သံဃာတော်မဵားနဲႛူပည်သူပည်သားမဵားအူပင် ကဵမတိုႛရႚဲ ညီအစ်ကိုမောင်ိံမြတြေူဖစ်ုကတဲ့ ရုပ်ရင်ြအိုံပညာသည်တြေ၊ တေးသံရင်ြတြေ၊ ဂီတသမားတြေ၊ စာပေသမားတေကြန္ဘေပီးတော့ သာသနာ့မဵက်ြိာံကိုကည့်္ဘပီးတော့ အားလုံး ထောက်ထောက်ကူကူ လုပ်နေတာကို တြေႛရတဲ့အတကြ်ေုကာင့် ၀မ်းလည်းသာပၝတယ်။ ကဵမ အဝေးကန္ဘေပီးတော့ မပၝ၀င်ိုိံင်တဲ့အတကြ်ေုကာင့် ၀မ်းလည်း နည်းမိပၝတယ်ရငြ်။ ဒၝပေမယ့်လိုႛ ဘယ်လိုပဲူဖစ်နေူဖစ်နေ ကဵမတိုႛဟာ သာသနာ့မဵက်ြိာံနဲႛုကည့်္ဘပီူးပည်သူမဵားနဲႛ သံဃာမဵားနဲႛ ကိုယ့်ညီအစ်ကိုမောင်ိံမြမဵားနဲႛ အ္ဘမဲတမ်းအတူတူ စိတ်ရြိနေမယ် ဆိုတဲ့ ကတိက၀တ်ကိုတော့ ကဵမ အ္ဘမဲတမ်း ပေးနေိုံင်ပၝတယ်။ အားလုံးကိုလည်း ကေဵးဇူးတင်ပၝတယ်၊ အားလုံးကိုလည်း သတိရပၝတယ်။ ။ (မိုးမခ စာနယ်ဇင်းအဖြဲႚရဲႚ အုကံပေးအမဆြောင်တစ်ဦူးဖစ်တဲ့ မာမာအေး ကိုယ်တိုင်က သြေးေူမကဵနေတဲ့ သံဃာတော်မဵားဘက်က ရပ်တည်ေုကာင်း၊ ဆက်လက်ူပီး သာသနာကို ကာကယ်ြစောင့်ရြောက်နေဖိုႚုကြိးစားမြာူဖစ်ေုကာင်း တရားဝင်ေူပာုကားလိုက်ပၝူပီ။ မိုးမခ စာနယ်ဇင်း အဖြဲႚသားမဵားက စာပေ နဲႚ စာနယ်ဇင်း လတ်ြလပ်ခငြ့် ဘာသာရေး လတ်ြလပ်ခငြ့်အတကြ် ရဲရင့်သူမဵား ဆောင်ရက်ြနေသူမဵားနဲႚ အတူ ဂုဏ်ယူစြာူဖင့် ရပ်တည်နေမြာူဖစ်ပၝတယ်။)
Reactions:ူပည်ပရောက်ူမန်မာတြေ ဘာလုပ်နေသလဲ
ူပည်ပရောက်ူမန်မာတြေ ဘာလုပ်နေသလဲသူရိန်ထက်စက်တင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၀၇ ဗိုလ်အောင်ဒင် ဇာတ်လမ်းထဲမြာ (ပုလိပ်တြေ ဘာလုပ်နေသလဲ) ဆ္ဘိုပီး သတင်းစာတေမြာ ရေးကုန်ုက္ဘပီလိုႛေူပာတာလေး အမတ်ြရလိုႛ ဒီခေၝင်းစဉ်ပေးမိတာပၝ။ တမဵြိး မထင်ုကပၝနဲႛ။ ကဵနော် ဒီစာကိုပည်ပရောက်ူမန်မာတေကြို ဆော်ဖိုႛိံက်ြဖိုႛမဟုတ်ဘဲ အကူအညီ တောင်းခဵင်လိုႛ ရေးလိုက်တာပၝ။ (စကားခဵပ်) ဟုတ်ပၝတယ်၊ ကဵနော် အကူအညီတစ်ခုလောက် တောင်းခံခဵင်ပၝတယ်။ ဒီအကူအညီမတောင်းခင် ကဵနော်တြေးမိ ကောက်ခဵက်ဆဲမြိတဲ့ အခဵက်လေး ၃ ခဵက်ကို တင်ူပပၝရစေ။ (၁) လတ်တလော အရေးတော်ပုံဋ္ဌကီူးဖစ်ပေၞလာတာဟာ အေုကာင်းရင်းတြေ ရြိပေမယ့် အခုလို အရြိန်ူမင့်ူမင့်ူဖစ်လာတာဟာ သံဃာတော်တြေ ပၝ၀င်လာလိုႛပၝ။ လူအခဵင်းခဵင်း သတ်ူဖတ် ဖမ်းဆီးနေတာ ဒီလောက် မခံစာုးကပေမယ့် သံဃာကို ထိတောူ့ပည်သူတြေ အမဵားအူပား ထက်ြပေၞလာခဲ့တာပၝ။ူပည်သူတေဟြာ ဖမ်းမယ်ဆီးမယ် ပစ်ခတ်သတ်ူဖတ်မယ် ဆိုတဲု့ကားက ရဲရင့်ခဲု့ကပၝ္ဘပီ၊ (စကားခဵပ်အနေနဲႛတော့ ၂၆ ရက်က ဆိံ္ဋူပပဲမြာ ပစ်ခဵင်ပစ် ဆ္ဘိုပီး ရင်ကော့ပေးတဲ့ လူ ၃ ဦးကိုလည်ုးကည်ညြိဦးညတ်ြလိုက်ပၝရစေ) ဘာပဲူဖစ်ူဖစ်ူမန်မာူပည်သူတေဟြာ အမဵြိးဘာသာ သာသနာကို စော်ကားရင်တော့ လက်မခံဘူးဆိုတာ ကောက်ခဵက်ဆဲလြိုႛ ရိုံင်ပၝတယ်။ ဘာသာရေးဟိာိုံင်ငံရေးမြာ အရေးပၝတယ်ပေၝ့ ခင်ဗဵာ၊။ (၂)ူပည်ပရောက်ူမန်မာတြေ ဘာလုပ်နေလဲ။ူပည်တငြ်းကူမန်မာတြေ ဘာလုပ်နေလဲနဲႛ အူပန်အလနြ်ေူပာဆိုကတာမဵြိး မုကာခဏုကားရသလို နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်တတ်ိုံင်တဲ့ဘက်က ရပ်တည်ဆောင်ရကြ်ုကဖိုႛ အေူဖထက်ြလာပၝတယ်။ူပည်ပရောက်နေတဲူ့မန်မာတေကြ တတ်ိုံင်သလောက်လုပ်ုကမယ်ဆ္ဘိုပီူးပည်တငြ်းကို ငေတြေလြုက၊ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရပိုင်း ကုလသမဂ္ဂပိုင်းတေကြို သိုင်ုးက၀ိုင်ုးကဖိုႛ အရေးဆိုက၊ သတင်းတြေူဖန်ႛခဵိုက၊ အဋ္ဌကူံပဆြေးြေိံုးကတာတေကြိုလည်း ၀မ်းေူမာက်ဖယြ်ုကားသိရပၝတယ်။ နောက်ထပ် လုပ်ိုံင်တာရြိရင်လည်း အခဵိန်မရြေး လုပ်ဆောင်ဖိုႛ အသင့်ူဖစ်နေတယ်လိုႛ ဆိုရမြာပၝ၊။ (၃) လန်ြခဲ့တဲိံ့စ်ြတေကြ ဘာသာတစ်ခုက (သတင်းစာတစ်စောင်က ကာတနြ်းတေဟြာ … သူတိုႛဘာသာကို စော်ကားရာရောက်တဲ့ အခဵက်တြေ ပၝ၀င်လိုႛ) ဆ္ဘိုပီး ဘာသာတိူိုံင်ငံမဵားက ၀ိုင်းဝန်းဆိံ္ဋူပုက။ သဘောထားတြေ ထုတ်ူပန်ဆူပူုကနဲႛ လုပ်လိုက်တဲ့အခၝ ကမ္တာကေဵာ်အောင်ူဖစ်သြားခဲ့ရပၝတယ်။ ဖော်ူပပၝအခဵက် ၃ ခဵက်ကို စဉ်းစားရင်း ကဵနော့်အနေနဲႛူပည်ပရောက်ူမန်မာတေကြို တစ်ခုလောက် အကူအညီတောင်းခဵင် ပန်ုကားခဵင်တာလေးတစ်ခု ရြိလာပၝတယ်။ အထူးသူဖင့်တော့ အာရကြ ဗုဒ္ဌဘာသိာိုံင်ငံတေရြောက်ူမန်မာမဵားကို ပန်ုကားခဵင်တာပၝ။ မိမိတိုႛရောက်နေတဲိုံ့င်ငံတေကြ ဗုဒ္ဌဘာသာအဖြဲႛအစည်းတြေ ဘာသာရေးခေၝင်းဆောင်တေဆြီ အီးမေးလ်ကပဲူဖစ်ူဖစ် စာတိုက်တေကြပဲူဖစ်ူဖစ် သြားရောက်တြေႛဆုံလိုႛပဲူဖစ်ူဖစ် အခုလိုမန်မာူပည်မြာ ဗုဒ္ဌဘာသာကို စော်ကားခံနေရတာတြေ၊ လူအခဵင်းခဵင်း သတ်ူဖတ်နေတာတြေ … စတဲ့ စတဲ့ အခဵက်တေကြို သီကုံးေူပာူပ္ဘပီး အနည်းဆုံး သဘောထား ထုတ်ူပန်တာမဵြိးလောက်ူဖစ်ူဖစ် အကူအညီပေးဖိုႛ တောင်းဆိုပေုးကပၝလား ခင်ဗဵာ။ ဥပမာ- ထိုင်းရောက်ူမန်မာတြေ။ ကိုးရီးယားရောက်ူမန်မာတြေ။ ဂဵပန်ရောက်ူမန်မာတြေ အိံ္ဋယရောက်ူမန်မာတြေ စကဿာပူရောက်ူမန်မာတြေ … စသည် စသည်ူဖင့်ပေၝ့။ ကဵနော်တြေးမိတာလေးကို တင်ူပတောင်းဆို မေတ္ဇာရပ်ခံလိုက်ရပၝတယ်။ တစုံတရာ ထိရောက်မြ ရြိုံင်မယ်ထင်မိပၝရဲႛ ခင်ဗဵ။ အနီးကပ် စောင့်ုကည့်နေပၝတယ်ဆိုတဲ့ အိမ်နီးခဵင်ိးိုံင်ငံတေကြ အစိုးရပိုင်းက မဵက်ြိာံလဲခြဵင်ရင်တောင် ဘာသာရေးပိုင်းက ကဵနော်တိုႛ ဋ္ဌကြိးစာုးကည့်ရအောင်လားခင်ဗဵာ။ ။
Reactions: ကမ္တာအရပ်ရပ်မြူမန်မာမဵား သိုႚ
ူမန်မာူပည်ိံငြ့်ူမန်မိာိုံင်ငံသားအားလုံးအတကြ် ကမ္တာအရပ်ရပ်မြူမန်မာမဵားဆောင်းဦးပန်းစက်တင်ဘာ ၂၇၊ ၂၀၀၇ူပည်တငြ်းကတော့ ဒီလောက် အကဵပ်အတည်းဆိုက်၊ အေုကာက်တရားတြေူပည့်သိပ်နေတဲ့ အခဵိန်ကာလမြာ လူသိန်းခဵ္ဘီပီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လမ်းမပေၞခဵီတက်၊ သေနတ်ေူပာင်းဝ၊ တုတ်၊ မဵက်ရည်ယိုဗုံး စတာတေကြို အံတ္ဘုပီး အကာအကယ်ြမဲ့ တာဝန်ကေဵခဲု့က္ဘပီ။ ဒီနေႛူပည်ပမြာ အေူခခဵနေထိုင်ုကတဲူ့မန်မာလူမဵြိးတေကြရော … စကဿာပူလို စစ်အစိုးရမဵြိးံယ်ြစုတြေ လက်ဝေခံတြေေူခရပ်ြနေတဲိုံ့င်ငံမြာတောင် ကိုယ့်ေူမးအရယြ် သားအရယြ်၂၀-၃၀ ၀န်းကဵင် ကေဵာင်းသားလေးတေဟြာ ခေၞစစ်မေးခံရတာကို မမဘြဲ၊ူမန်မာူပည်ူပန်ပိုႛခံရမယ့် အိံ္ဇရာယ်ဆိုးမဵြိးကို မမဘြဲ စည်းစနစ်ကဵကဵ ခဵီတက်ဆိံ္ဋူပခဲု့ကတယ်။ မလေးရြားမြာလည်း တက်တက်ရကရြကပြၝပဲ။အမေရိကန်ူပည်ထောင်စု အရြေႚဘက်ူခမ်းဆိုလည်း လူ ၃၀၀ နီးပၝး တစုတစည်းတည်း္ဘငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋူပိုံင်ခဲ့တယ်။ အနောက်ဘက်ူခမ်းမြာလည်ုးသဂုတ် ၃၀၊ စက်တင်ဘာ ၂၁ တေမြာ အယ်လ်အ္ဘေမြိႛမြ္ဘာငိမ်းခဵမ်းရေးကိုမတ်ိုံးတဲ့လူတ္ဘြေငိမ်း္ဘငိမ်းခဵမ်းခဵမ်း ဆိံ္ဋူပိုံင်ခဲ့တယ်။ ဒၝပေမယ့် အရေႚဘြက်ူခမ်း လူဦးရေကို မမီိုံင်ခဲ့ပၝဘူး။ ဒီနေႛူမန်မိာိုံင်ငံမြာ ဆိံ္ဋူပမမြဵားရႚဲအေူခအနေဟာ ၈၈၈၈ ကထက် အားသာတာကူပည်ပိုံင်ငံတေမြာ အေူခခဵနေတဲူ့မန်မာလူမဵြိးပမာဏ အလန်ြမဵာူးပားန္ဘေပီး အင်တာနက် ဆက်သယ်ြရေး ဖြံႛ္ဘဖြိးတိုးတက်မတြေူဖစ်ပၝတယ်။ူပည်ပကိုေူပာင်းရြေႚအေူခခဵလာတဲူ့မန်မာတော်တော်မဵားမဵားဟာလည်း စားဝတ်နေရေး အတန်အသင့် အေူခကဵနေုကသူတြေူဖစ်လာပၝ္ဘပီ။ အဲဒီတောူ့မန်မိာိုံင်ငံမြ ထက်ြခြ္ဘာပီူးပည်ပမြာ ရောက်ရြိနေထိုင်ုကသူတေအြနေနဲႛ ခုခဵိန်ခၝ သံဃာတော် ကေဵာင်းသာူးပည်သူအားလုံးဟာ အသက်အိံ္ဇရာယ်၊ မိသားစအိံ္ဇရာယ် အရေးကို အမမြထားဘဲူမန်မာူပည်အတက်္ဘြငိမ်းခဵမ်းရေး လုပ်ဆောင်နေုကခဵိန်မြာ "ဒီနေႛရော ဘာတေထြူးလဲ" "မပစ်သေးဘူးလား" "ူမန်မာူပည်အေူခအနေ ဘယ်လိုလဲ" စသူဖင့် လက်ဖက်ရည်ုကမ်းနဲႛူမည်းရုံ၊ လက်ဖက်သုတ်နဲႛူမည်းရုံ၊ မိတ်သစ်ဆေသြစ်ရခဵိန် သံေူပာတမန်ေူပာ အေုကာင်းအရာတစ်ခုရရုံ စပ်စုလိုစိတ်တစ်ခုတည်းနဲႛ အပေၞယံတင် တိုႛထိူမည်းစမ်းမနေုကပၝနဲႛ။ ဒီကိင်္စဟာ စိတ်အပန်းေူဖစရာ ဘောလုံးပြဲုကည့်သလို ကိင်္စမဵြိးမဟုတ်သလို၊ ဦးြေိာံက်အညောင်းေူဖစရာူမန်မာူပည်က ဂဵာနယ်တေမြာ မုကာခဏဖော်ူပတတ်တဲ့ အဆိုတော် ရုပ်ရင်ြမင်းသမီးတြေ နောက်အိမ်ထောင်ူပြူခင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ူခင်းသတင်း စတဲ့ ပေၝ့ပဵက်ပဵက်ကိင်္စမဵြိးလည်း မဟုတ်ပၝဘူး။ တမဵြိးသားလုံး တိုံင်ငံလုံးနဲႛဆိုင်တဲ့ အရေးဋ္ဌကီးဆုံး အရေးပေၞအခဵိန်ကာလမဵြိးပၝ။ ၀ၝတငြ်းကာလမြာ ဆိံ္ဋူပတဲ့အတကြ် ကေဵာင်းပေၞကိံင်ြခဵခံရတဲ့ ဆမြ်းငတ်တဲ့ မိုးသည်းဋ္ဌကီးထဲ သကဿန်းရေတရြဲရြဲနဲႛ အားမလ္တွော့စတမ်ူးပလိုႛ နာမကဵန်ူးဖစ်နေတဲ့သံဃာတော်တြေ၊ ညနက်သန်းခေၝင် အိမ်တံခၝးလာခေၝက်္ဘပီး ဘယ်နေရာခေၞသြားမနြ်း မသိလိုက်ပၝသြားရတဲ့ ကေဵာင်းသားတြေ၊ သားငယ်သမီးငယ်တြေ ပစ်ထားခဲ့္ဘပီး သေနတ်ေူပာင်းဝ ခေၞဆောင်ရာ လိုက်ပၝသြားရတဲူ့ပည်သူတြေ၊ အာဏာပိုင်တေကြို ဖီဆန်လိုႛ အလုပ်ထုတ်ခံရ၊ လူႛအသိုင်းအ၀ိုင်းက အေုကာက်တရားနဲႛ မောင်းထုတ်ခံရတဲ့သူတြေ၊ အသက်မြေးဝမ်းကေဵာင်း လုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းခံရသူတြေ … သူတိုႛနေရာဝင်္ဘပီး သူတိုႛဒုက္ခတေကြို ၁၀ ပုံ ၁ ပုံပဲ ၁၀ မိနစ်စာလောက် ခံစာုးကည့်ုကပၝ။ သားတကြဲ မယားတကြဲ၊ မိတကြဲ ဘတကြဲူမန်မိာိုံင်ငံသားတြေ ဘယ်လောက်မဵားနေသလဲ။ မိမိကိုယ်တိုင် စစ်အစိုးရခေတ်မြာ ခေတ်ပဵက်သဌေူးဖစ်နေဦး၊ စစ်အစိုးရနဲႛ အကဵြိးတူ စီးပြားရေး လူမရြေး ကူးလူးယက်ြသယ်ြခဵစ်ဋ္ဌကြိးံယြ်ူဖစ်နေပၝစေဦး၊ူပည်ပရောက်လဵက်နဲႛ စစ်အာဏာရငြ် အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲႛ ပတ်သက်ရမြ စားဝင်အိပ်ပေဵာ်ူဖစ်နေပၝစေဦး "လူလူခဵင်း ညြာတာထောက်ထားစိတ်မဵြိးလေး မြေုးကည့်ုကပၝ။ ကိုယ့်သားသမီးခဵင်း၊ေူမူးမစ်ခဵင်း၊ မိဘအရယ်ြခဵင်း ကိုယ်ခဵင်းစာုကည့်ုကပၝ။ လက်ရြိစစ်အာဏာရငြ် အသိုင်းအ၀ိုင်းနဲႛေူဗာင်ကဵကဵ သော်လည်းကောင်း၊ ခိုးေုကာင်ခိုးဝက်ြသော်လည်းကောင်း အပေးအယူ အပတ်အသက် ရြိသူမဵားလည်း ယခုအခဵိန်ဟာ "သာ" ခဵိန် ရောက်နေပၝ္ဘပီ။ူပတ်ူပတ်သားသား "ကူး"လိုက်ုကပၝ။ ခုအခဵိန်မြာ စောစောစီးစီး "သာကူး" ထားလိုက်ုကရင် နောင်တခဵိန်မြာ အေူပာအဆိုခံရ အလန်ြသက်သာမြာူဖစ်္ဘပီး နောင်ူပည်သူႛဒီမိုကရေစီအစိုးရ တက်လာခဵိန်မြာလည်း ခုလိုပဲ စီးပြားရေး ရေလြမ်းငေလြမ်း ဆက်ဖောက်ိုံင်ုကဦးမြာပၝ။ နောက်ဆုံးေူပာလိုတာကူမန်မိာိုံင်ငံက ထက်ြခြာလ္ဘာပီး "အမေရိကန်" လိုႛ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူထာုးကသူမဵား …ိုံင်ငံသားတိုင်းဟာ ကိုယ်လက်ရြိနေထိုင်တဲိုံ့င်ငံအစိုးရရႚဲ မူဝၝဒဟာ ဘာဆိုတာ သိုကမြာပၝ။ ကိုယ်နေနေတဲိုံ့င်ငံကို ကိုယ်ခဵစ်ခင်ုကလိမ့်မယ်လိုႛ ယုံကည်ပၝတယ်။ူမန်မာူပည်ကလာသော လက်ရြိ အမေရိကန်ိုံင်ငံသားဋ္ဌကီးမဵား အနေနဲႛလည်း သမ္ထတဋ္ဌကီး ဘုရ်ြကိုယ်တိုင်၊ သမ္ထတကတော် လော်ရာဘုရြ် ကိုယ်တိုင်၊ အမေရိကန်ိုံင်ငူံခားရေးဌာနကိုယ်တိုင် မိမိတိုႛရဲႚ အမိေူမအပေၞ ဘယ်လိုမူဝၝဒတေထြားသလဲ၊ ဘာတြေေူပာသလဲ နားစငြ့်ုကပၝ။ူမန်မိာိုံင်ငံက ဗိုလ်ခဵပ်ြမောင်အေးတိုႛ သူရရေမြန်းတိုႛနဲႛ မပတ်သက်ရမြာစိုးလိုႛ သမ္ထတ ဘုရ်ြစကား ၁၀ နဲႛ စားပၝဆိုရင်တောူ့မန်မာအမေရိကန်ဋ္ဌကီးတေအြနေနဲႛ အမေရိကန်ူပည်ဋ္ဌကီးမြာ ဆက်လက်နေထိုင်ဖိုႛရာ တော်တော် အိံ္ဇရာယ်မဵားတဲ့ ကိင်္စလိုႛပဲူမင်မိပၝတယ်။ူပည်ပရောက်ူမန်မာလူမဵြိးတေအြနေနဲႛ မိမိတတ်ိုံင်တဲ့ဘက်က စုပေၝင်း္ဘပီူးပည်တငြ်းက သံဃာလူထုကို ၀ိုင်းဝန်းအာူးဖည့်ဖိုႛ ၁။ ငေအြာူးဖင့် ကူညီူခင်း မိုးမခမီဒီယာမြူမန်မာူပည်မြ္ဘာငိမ်းခဵမ်းစြာ ဆိံ္ဋူပသူ ရဟန်းရင်ြလူအပေၝင်းအတကြ် ကဵန်းမာရေး လူမရြေး ကူညီပံ့ပိုးပေးဖိုႛ အလငြေမြဵား ကောက်ခံနေပၝတယ်။ တတ်အားသလောက် ကူညီုကဖိုႛ မေတ္ဇာရပ်ခံပၝတယ်။ မိမိနဲႛသက်ဆိုင်ရာ လူမရြေးအသင်းတေကြ တဆင့်လည်း ကူညီိုံင်ပၝတယ်။ ရန်ပုံငေရြာနေုကတဲ့ အဖြဲႛအစည်းတေကြတဆင့်လည်း ကူညီိုံင်ပၝတယ်။ အားလုံးရႚဲ ပန်းတိုင်ဟာ အတူတူပၝပဲ။၂။ စာရက်ြစာတမ်းအာူးဖင့် ကူညီူခင်ူးမန်မာူပည်မြ္ဘာငိမ်းခဵမ်းစြာဆိံ္ဋူပသူတေအြား အုကမ်းဖက်ြိံမ်နင်းနေတာကိုိုံင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းနဲႛ ကမ္တာ့ကုလသမဂ္ဂက သိဖိုႛ လက်မတ်ြမဵား စုပေၝင်းရေးထိုး္ဘပီး ကုလသမဂ္ဂနဲႛတကြ သက်ဆိုင်ရိာိုံင်ငံခေၝင်းဆောင်မဵားထံ ပေးပိုႛူခင်း။ ၃။ လူအင်အာူးဖင့် ကူညီူခင်း ရောက်ရာအရပ်မြူမန်မာူပည်သူမဵား စုပေၝင်း္ဘပီး အင်အားတရပ်ူပကာ ထောက်ခံဆိံ္ဋူပုကရန်။(မတ်ြခဵက် - အမေရိကန်လိုိုံင်ငံမဵြိးမြာ ဆိံ္ဋူပခဵိန်တငြ် ၀ိုင်းရိုက်မည့် ဋ္ဌကံႛဖြံႛ စမြ်းအားရင်ြမဵား မရြိသလို၊ လုံခဵည်ဘောင်းဘီ ဆြဲခဋ္ဋတ်မည့်သူတေလြည်း မရြိပၝ။ သေနတ်ေူပာင်းဝလည်ူးမင်ခဵင်လိုႛတောင် မူမင်ရပၝ။ အခဵိန်နဲႛ လုပ်အားခလေး အနာခံ၊ အတန်းကေဵာင်း တစ်ရက်ဖဵက်ရရုံသာ ရင်ြးီံးရပၝမည်။) ၄။ မတ်ြတမ်းမတ်ြရာ အထောက်အထာူးဖင့် ကူညီူခင်ူးမန်မာူပည်တငြ် အုကမ်းဖက်နေသည့် အထောက်အထား မည်သည့်ပုံမဆို ကမ္တာ့မီဒီယာသိုႛူဖန်ႛခဵူခင်ူးဖင့်ိုံင်ငံတကာ အာရုံစိုက်မရြယူရန်။ ၅။ လေအာူးဖင့် ကူညီူခင်း ယင်းနည်းလည်း စိတ်ဓာတ်ရေးရာအာူးဖင့် သော်လည်းကောင်း၊ ဆက်သယ်ြရေး သတင်ုးကားခံနယ် အူဖစ်ူဖင့်လည်းကောင်း အလန်ြအကဵြိးရြိပၝသည်။ ဖုန်းလေးတခဵက်ဆက် သတင်းလေူးဖန်ႛပေးရုံဖင့်၊ လမ်ူးပေူမပုံေူပာူပရုံဖင့် လူအမဵား အာရုံစိုက်မိစေသည့်တန်ဖိုး ရြိပၝသည်။ လေကောင်းလေသန်ႛူဖစ်ဖိုႛတော့ လိုပၝသည်။ "ူမန်မာတြေ ဘာအသုံးကဵလဲ။ ရန်ခဵည်ူးဖစ်နေ … " "၁၉ိံစ်ြရြ္ဘိပီ လုပ်လာတာ။ အသုံးမကဵလိုႛ ရလဒ်က မကောင်းတာပေၝ့။ စစ်တပ်လည်း ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲ … " အစရြိသူဖင့် လေပုပ်လေညစ် လေဆိုးလေတေတြေ မူဖစ်ဖိုႛသာ အရေးဋ္ဌကီးပၝသည်။ ကမ္တာ့လေထု (လေကောင်းလေသန်ႛ)တြေ မရြိဘဲ လူသားတြေ အသက်မရြိုံင်ပၝ။ အသက်မရငြ်ိုံင်ပၝ။ ၆။ အတိုက်အခံခေၝင်းဆောင်မဵားကို လေးစားပံ့ပိုးခင်း စစ်အစိုးရကို နည်းမဵြိးစုံဖင့် ဆန်ႛကဵင်နေုကသောူပည်တငြ်ူးပည်ပရြိ အတိုက်အခံခေၝင်းဆောင်အားလုံးကို ပုဂ္ဂိလ်ြရေးဆိုင်ရာမဵား ဘေးဖယ်ထား္ဘပီး ၄င်းတိုႛ၏ မူဝၝဒမဵားကို အလေးပေးဆြေးြေိံူးခင်း၊ စုပေၝင်းတိုင်ပင်ူခင်း၊ အကဵြိးအူပစ် ဝေဖန်ထောက်ူပ္ဘပီး အားလုံး ညီညီညတ်ြညတြ် ရြေႚသိုႛဆက်ရေး။ူပည်ပရောက်ူမန်မာလူမဵြိးမဵားအနေူဖင့် အမိူမန်မိာိုံင်ငံတော်ဋ္ဌကီးကို ခဵစ်ူမတ်ိုံးဆဲူဖစ်္ဘပီူးမန်မာလူမဵြိးအားလုံးကို စာနာထောက်ထားကာ လတ်ြလပ်မြ၊္ဘငိမ်းခဵမ်းမြ၊ တရားမ္တွတမတြိုႛကို တန်ဖိုးထာုးကလိမ့်မည်ဟု ယုံကည်ပၝသည်။ ။ (၂၀၀၇ စက်တင်ဘာ၂၆)